နျူကလိယထဲမှာ dopamine ကိုကျော်လွန်ပြီးဆုလာဘ်လမ်းညွှန်မှုကိုလေ့လာခြင်း accortens: cortico-basal ganglia ကွန်ယက်များ၏ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုများ (2008) - Your Brain On Porn
EUR J ကို neuroscience ။ 2008 Oct;28(8):1437-48. doi: 10.1111/j.1460-9568.2008.06422.x.
ယဉ်နာရီ1, Ostlund SB, Balleine BW.
ဤတွင်ကျနော်တို့ဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှုတစ်ခုတည်းကိုသာအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံမှပေါ်ပေါက်သည့် mesoaccumbens လမ်းကြောင်းကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်နျူကလိယ accumbens မှထုတ်လုပ်တဲ့သောအမြင်စိန်ခေါ်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောအမြင်ဆုလာဘ်တစ်ခု monolithic အယူအဆဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မကြာသေးခင်ကအလုပ်မဟုတ်ရင်အကြံပြုခဲ့သည်ယူဆတယ်။ ဒါဟာယခုဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှု, ventral နှင့် dorsal striata ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်သူတို့နှင့်အတူဆက်စပ် cortico-Basal ganglia circuitry အတွက် dissociated နိုင်ပြီးပုံရသည်။ နျူကလီးယပ် accumbens သွားရမည်အကြောင်းအခြို့သောအစာစားချင်စိတ် Pavlovian တုံ့ပြန်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်များအတွက်လိုအပ်သောသည်နှင့်ဆာပစွမ်းဆောင်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်, အ dorsal striatum ဆာလုပ်ရပ်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်သေးကြားမှာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် hierarchical Pavlovian ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်အရေးယူ-ရလဒ်ကိုပေါ်ဖြစ်ပေါ်ထိန်းချုပ်ထားရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆာပလုပ်ရပ်များအထိအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေအတွက်စေ့စပ် cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များဖွဲ့စည်းကြသည်အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်များအပြန်အလှန်မျိုးစုံလွတ်လပ်သော၏တည်ရှိမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
keywords: striatum, dopamine, Basal ganglia, သင်ယူမှု, နျူကလိယ accumbens, ဆုလာဘ်
ဒါဟာ (များသောအားဖြင့်စမ်းသပ်၏ရှုထောင့်ကနေ) သက်ရှိများအတွက်ကောင်းသောကြောင်းကိုဘာမှဖျောညှနျးမှဖြစ်စေ, အမူအကျင့် appetitive မှတစ်ပုံစံတည်းလျှောက်ထား '' ဆုလာဘ် '' တစ်ဦး monolithic concept ကိုရှာတွေ့မှမကြာသေးမီကစာပေအတွက်ဘုံဖြစ်လာ, ဒါမှမဟုတ်တူသောအဟောင်းတွေအသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုထားပါတယ် '' အားဖြည့် 'သို့မဟုတ်' 'မက်လုံးပေး။ ' ရေးရာဒီနိုင်ငံတော်ကအားပေးအားမြှောက်လျှင်မရကိုယ်တိုင်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ဖြန့်ချိ (DA) ပါဝင်သော '' ဆုလာဘ် '(အဘို့တစ်ခုတည်းအာရုံကြောအလွှာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်Berke နှင့် Hyman, 2000; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007).
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အသိအမှတ်ပြုသည့် mesoaccumbens လမ်းကြောင်းနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားအဆိုပါ link ကိုသည်, phasic DA signal ကိုယူဆရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ learnin အတွက်သင်ကြားရေး signal ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောအကျိုးကိုခန့်မှန်းအမှား, encodes ပိုမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားအားဖြင့်ပိုမိုအားသစ်လောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂရမ် (Schultz et al ။ , 1997) ။ လူကြိုက်အများဆုံးအနက်အဆိုအရအကျိုးသည်တစ်ခုတည်း signal ကိုလည်းမရှိ, ဒီတော့ဤကိစ္စတွင်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်အကျိုးကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆိုလိုတာကဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှု (အဘို့တစ်ခုတည်း signal ကိုလည်းမရှိသကဲ့သို့ဂူ et al ။ , 2004) ။ ထိန်းချုပ်မှုသပ္ပါယ်အပြုအမူသင်ယူခြင်းဤအမျိုးအစား, သို့သော်, လစျြလြူရှုခဲ့ပြီးမည်မျှ၏မေးခွန်းကို; ဒါဟာရိုးရှင်းစွာ dopamine signal ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သင်ယူမှုနှင့်ဖြင့်ပေါက်ဖွားပေးသောထိုခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှုနှစ်ဦးစလုံးအဘို့နှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့များကပဲ့ထိန်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များများအတွက်လုံလောက်သောကြောင်းယူဆနေသည်။ အကျိုးဆက်အားဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်း၏လယ်ပြင်တွင်အများဆုံးသုတေသနများ၏အာရုံစူးစိုက်ခြင်း (mesoaccumbens လမ်းကြောင်းအတွက် DA အချက်ပြခြင်းနှင့်ဆက်စပ် plasticity ဖြစ်ပါသည်Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Hyman et al ။ , 2006; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007).
ပို. ပို. အသိအမှတ်ပြုအဖြစ်အကျိုးကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဤအမြင်ကို, (Cardinal et al ။ , 2002; Balleine, 2005; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Hyman et al ။ , 2006), လုံလောက်မှုမရှိခြင်းနှင့်အထင်အမြင်မှားစေနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူမဟုတ်သလိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမနှိုးဆွ-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုဖျန်ဖြေကြောင်း The Associated ဖြစ်စဉ်များ၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောမဟုတ်သလိုလုံလောက်သောမဖြစ်သည့် mesoaccumbens လမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အထူးသီးသန့်အာရုံ, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်းအတိအကျအရာကို ပို. အခြေခံကျသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမှအာရုံလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်ကြောင့်၎င်း, ထိုမှတပါး, အထင်အမြင်မှားစေသည်နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့အကောင်အထည်ဖော်နေကြသည် ဦးနှောက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်စမ်းသပ်ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးကနေသက်သေအထောက်အထားဆုံသည်နှင့်အညီ, အဘယျသို့ယခင်ကတစ်ခုတည်းဆုလာဘ်ယန္တရားဖြစ်သည်ထင်ရှားခဲ့ပါသည်တကယ်တော့ကွဲပြားအပြုအမူသက်ရောက်မှုနှင့်အတူမျိုးစုံလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အာရုံကြောအလွှာ (ပါဝင်စေခြင်းငှါCorbit et al ။ , 2001; O'Doherty et al ။ , 2004; ယဉ် et al ။ , 2004; Delgado et al ။ , 2005; ယဉ် et al ။ , 2005b; Haruno နှင့် Kawato, 2006a; Tobler et al ။ , 2006; Jedynak et al ။ , 2007; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2007; Tobler et al ။ , 2007).
ဤတွင်ကျနော်တို့၎င်း၏အရပ်ဌာန၌လက်ရှိ mesoaccumbens မော်ဒယ်နှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများအချို့ကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အဆိုတင်သွင်းဖို့ဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကြိုးစား။ ကျနော်တို့ striatum သည်အခြား cortical, thalamic, pallidal နှင့် midbrain components နဲ့တစ်ဦးကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ယက်တွင်တစ်ဦးအချက်အချာအဖြစ်ပြုမူတစ်ခုချင်းစီထားတဲ့အနည်းဆုံးလေးအလုပ်လုပ်တဲ့ domains များသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်တစ်အလွန်အမင်းပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖွဲ့စည်းပုံမှာကြောင်းငြင်းခုန်ကြမည်။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုမှဆုလာဘ်များကရူးနှမ်းခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်မှုများ၏ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့်အထိကဤကွန်ရက်များ၏သမာဓိလုပ်ဆောင်ချက်များကို, dissociated နှင့်ခေတ်ပြိုင်အပြုအမူ assay သုံးပြီးလေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ mesoaccumbens လမ်းကြောင်းမကြာခဏကြောင်းဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းဆုလာဘ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ယူဆနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆုလာဘ်များကရူးနှမ်း DA ဆဲလ်များ၏ phasic လှုပ်ရှားမှုဆန်းစစ်စမ်းသပ်ချက်အချို့အတွက်, မျောက် (သီးဖျော်ရည်၏ပေးပို့နဲ့လှုံ့ဆော်မှုပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်Waelti et al ။ , 2001) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှု (CR) -anticipatory ကိုလျက်နှင့်အတူစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုံ့ပြန်ကြသည်။ အဲဒါကိုသီးဖျော်ရည်ကိုရရှိရန်လိုအပ်သောယုံကြည်သောကြောင့်မျောက်ရဲ့အကိုလျက်, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားကိုလျက်ဖျော်ရည်ဆက်နွယ်သောအတူ antecedent လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းနိုင်ပါသည်။ မျောက် '' ကိုလျက်ဤပြဋ္ဌာန်းသောအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နေသည် မဆိုအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာ လူသိများမဟုတ်ပါဘူး တစ်ဦးနှင့်အပေါ်ယံလေ့လာဆုံးဖြတ်မရနိုငျ; ကသာဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အထူးဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အများကြီးဆယ်စုနှစ်ယူကြပြီသောဤစမ်းသပ်မှုများ, သင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူများ၏လေ့လာမှုအတွက်အဓိကခေတ်မီတိုးတက်လာ၏အဓိကဖွဲ့စည်း (စားပွဲတင် 1) ။ ဒါကြောင့်လူနာချဉ်းကပ်မှု, Oriental, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလီဗာကိုနှိပ်သည်ဖြစ်စေ - - စမ်းသပ်မှုတွေအ dissociable ဖြစ်ကြောင်းမျိုးစုံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေပျေါပေါကျနိုငျသညျကိုအောကျတှငျဆှေးနှေးဤစမ်းသပ်မှုများအသုံးပြုခြင်းကနေကျနော်တို့အခုတူညီအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုငါသိ၏။
အပြုအမူများ၏အမှန်တကယ်လည်းသံန္နိဌာန်ဗဟိုမရေရာဒွိဟမှအာရုံမခံစားနိုင်သောအရှင်ဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှု၏လက်ရှိ neuroscientific ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ T ကဏကဘယ်လိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် (သို့မဟုတ် Pavlovian) လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြား (သို့မဟုတ်နျဆာပ) အကြားခြားနားချက်များတန်ဖိုးထားရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သင်ယူမှုထိန်းချုပ်မှုအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူဤပြဿနာများ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များဆုလာဘ်အပေါ်စာပေအတွက် conflated ခဲ့ကြပုံကိုမကြာခဏခြင်းဖြင့်စီရင်တော်, ဒီဂုဏ်ထူး၏အကျဉ်းပြန်လည်သုံးသပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုများအတွက်အသုံးဝင်သောစမှတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ဆာသင်ယူမှုအတွက်အကျိုးကိုတိရစ္ဆာန် '' လုပ်ရပ်များအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါသည်သော်လည်းအစာစားချင်စိတ် Pavlovian အေးစက်ခုနှစ်, (ထိုခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဆိုလိုသည်မှာ) ကိုဆုလာဘ်, မသက်ဆိုင်တိရစ္ဆာန်ရဲ့အမူအကျင့်များ, တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု (conditional လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ် CS) နဲ့တွဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအတွက်အရေးပါမေးခွန်းကိုစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နေသည်ဖြစ်စေ, သို့သော်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Pavlovian လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့တို့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ conditional တုံ့ပြန်မှု (CRS) မကြာခဏသူတို့ကိုအကြောင်းကိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားတဲ့ veneer ရှိနိုင်ပါသည်။ တောင်မှ salivation, Pavlov ရဲ့မူလ CR, ထည့်သွင်းသည့်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်တမင်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်သူ၏ခွေးအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ဆာအေးစက်အတွက်အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းအများအပြားဆယ်စုနှစ်အများကြီးပံ့ပိုးမှုသိမ်းသွင်း ထား. သင်ယူ-ပျက်ကွက်, Pavlovian အေးစက်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့သင်ယူသောအထင်ရှားဆုံးရှင်းပြချက်-အမည်ရကွောငျ့ဒီမရေရာဒွိဟ၏အတိအကျဖြစ်ပါတယ်Skinner, 1938; Ashby၊ ၁၉၆၀; Bolles, 1972; Mackintosh, 1974) ။ အများအပြား Pavlovian CRS ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်ဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်အပြုအမူအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသို့မဟုတ်သူတွေရဲ့စားသောက်အခြား CRS ဖြစ်ကြ၏သော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေ (သွင်ပြင်လက္ခဏာကြသည်မဟုတ်Rescorla နှင့်ရှောလမုန်, 1967); အကယ်စင်စစ်သူတို့ကအလွယ်တကူ (ဆာလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်မှားနိုင်ပါတယ်ဘရောင်းနှင့် Jenkins, 1968; ဝီလျံနှင့်ဝီလျံ, 1969; Schwartz နှင့် Gamzu, 1977) ။ ကျနော်တို့အခုအပေါ်ယံအကြံအစည်ရှိနေသော်လည်း Pavlovian CRS နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆာပလုပ်ရပ်တွေပါ (တုန့်ပြန်၏စွမ်းဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကွဲပြား, သင်သိရSchwartz နှင့် Gamzu, 1977).
တစ်တုံ့ပြန်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်တစ်လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့တို့ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှိမရှိထူထောင်ရန်အများဆုံးတိုက်ရိုက်နည်းလမ်းတိကျသောအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ salivation ၏စံနမူနာကဒီမှာမှတ်သားစရာများဖြစ်ပါတယ်။ ရှက်ဖီး (1965) Pavlovian အေးစက်အတွက် salivation ဆုချရန်၎င်း၏ကြားဆက်ဆံရေးအားဖြင့်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ မိမိအစမ်းသပ်မှုများတွင်ခွေး (ကသေံနှင့်အစားအစာဆုလာဘ်များအကြားဒဿနိကဗေဒကိုလက်ခံရရှိရှက်ဖီး, 1965) ။ ခွေးသေံစဉ်အတွင်း salivated လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ထို့နောက်စားနပ်ရိက္ခာကြောင်းစမ်းသပ်မှုအပေါ်ကိုအပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီအစီအစဉျကိုလသေံနှင့်အစားအစာအကြားတစ်ဦး Pavlovian ကြားဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားပေမယ် salivation နှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေတို့အကြားမည်သည့်တိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့ဖျက်သိမ်း။ အဆိုပါ salivation အစားအစာရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကထိန်းချုပ်ထားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်လျှင်, ခွေး salivating-အမှန်ပင်သူတို့မှာအပေါငျးတို့သသေံမှ salivation ဆည်းပူးဘယ်တော့မှသငျ့သညျကိုရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ ရှက်ဖီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်း salivation CR ထိန်းချုပ်ထားသော Pavlovian သေံ-အစားအစာကြားဆက်ဆံရေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 800 သေံ-အစားအစာဒဿနိကဗေဒကျော်၏သင်တန်းကာလအတွင်းခွေးဝယ်ယူနှင့်ဤသူတို့၏သူတို့ salivating မဟုတ်ဖြင့်ရရှိသောနိုငျခဲ့အစားအစာအများစုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုပင်သော်လည်းသေံမှ salivation ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူနိဂုံးချုပ်လူသားမြားသညျ (Pithers, 1985) နဲ့လေ့လာမှုများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များ (အခြားသူများအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘရောင်းနှင့် Jenkins, 1968; ဝီလျံ & ဝီလျံ, 1969; ဟော်လန်, 1979); အားလုံးကိစ္စများတွင်ပါကမိမိတို့အကြီးမြတ်အမျိုးမျိုးရှိနေသော်လည်း Pavlovian တုံ့ပြန်မှုအကျိုးကို-ie action ကို-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကထိန်းချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်, ပုံရသည်။
အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအရေးပေါ် B က၏ဖြစ်ပျက်မှုကဒီမျိုးတစ်ဦးကဆက်ဆံရေးဟာအလွယ်တကူအေဒီ၏မရှိခြင်းအတွက် B ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ကြောင့်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်အေပေါ်တွင်မူတည်သည်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, '' ခ 'ဖြစ်ရပ်တစ်ခု' 'တစ်ဦးက' နှင့်အခြားအကြားခြွင်းချက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည် အရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းစမ်းသပ်ကိုင်တွယ်, လေ့လွတ်လပ်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ် action ကိုဖြစ်စေ၏အကျိုးကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုမူလက Pavlovian အေးစက်လေ့လာဖို့တီထွင်ခဲ့သော်လည်း (Rescorla, 1968), ဆာပအရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းကိုလည်း (ကဘုံ tool ကိုဖွစျနပွေီHammond ဟာ, 1980) ။ ဤအပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုက်ရိုက်ကြိုးကိုင်နေကြသည်အခါ, သင်ယူမှုများ၏ content ထင်ရှားနေသည်: autoshaping အတွက်ဥပမာတစ်ခုနျဆာပအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဟာ Pavlovian ၏ထိန်းသိမ်းရေးထက်ဆာပအရေးပေါ် (အားဖြင့်နှောင့်အယှက်အတိုင်း, တစ်ဦး Pavlovian CR '' ်၏ ''Schwartz နှင့် Gamzu, 1977).
1) ရလဒ်ကို၏တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုများမှ sensitivity ကိုနှင့် 2) အရေးယူနှင့်ရလဒ်ကိုအကြားအရေးပေါ်ပြောင်းလဲမှုများမှ sensitivity ကို: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆာပလုပ်ရပ်များနှစ်ခုသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ် (Dickinson, 1985; Dickinson နှင့် Balleine, 1993) ။ အချို့သော Pavlovian တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းဒီကိုင်တွယ်ရန်အထိခိုက်မခံဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့တစျယောကျတညျးရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှ sensitivity, ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ရပါမည်, (ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအဖြစ်တုန့်ပြန် characterizing အတွက်လုံလောက်မပါဘူးဟော်လန်နှင့် Rescorla, 1975) ။ Pavlovian တုံ့ပြန်မှုဟာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်၏ထိန်းသိမ်းရေးမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြသော်လည်းသို့သော်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆာလုပ်ရပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည် (ကိုလည်းအရေးယူ-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်၏ထိန်းသိမ်းရေးမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါသည်Rescorla, 1968; Davis ကနှင့် Bitterman, 1971; Dickinson နှင့် Charnock, 1985) ။ အရေးပါသောခြွင်းချက်သို့သော်ဆာပအရေးပေါ်ပြောင်းလဲမှုများ၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးထုံထိုအတွက် Pavlovian တုံ့ပြန်မှုပိုမိုဆင်တူသည့် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အလေ့အထများ၏ဖြစ်ရပ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်ရလဒ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လည်းရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှ impervious များမှာ အဆိုပါကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထိန်းချုပ်ထားစွမ်းဆောင်ရည် ( cf. ၏ Dickinson, 1985 အောက်တွင်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်) ။
အနှစ်ချုပ်ရန်, ထို့နောက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်တုန့်ပြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိန်းချုပ်အရေးပေါ်၏သက်တမ်းအတွက်ထက်တုံ့ပြန်မှုပုံစံသို့မဟုတ်တည်ထောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သောအပြုအမူတာဝန်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ခံရသောအစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသည်။ ပေးထားသောအခွအေနအတွက်ထိန်းချုပ်အရေးပေါ်ဆန်းစစ်မရှိပဲ, အပြုအမူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေ့ရတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များနှစ်ဦးစလုံး mischaracterized ခံရဖို့များပါတယ်။ ကျနော်တို့ငြင်းခုန်ကြလိမ့်အဖြစ်နောက်ဆုံးတွင်ကအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်, သင်ယူမှုမှတဆင့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်သူတို့အတူတူပင် '' နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း '' ဝေမျှစေခြင်းငှါသော်လည်း, အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ကြောင့်ကွဲပြားအာရုံကြောစနစ်များ, ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။ အရှင်အလယ်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှုတွေ့မြင်အကျဉ်းချုပ်အဘို့ (ထိုအခြေခံအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်အပြုအမူလှန်ဖို့ပွဲကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် စားပွဲတင် 1) ။ တိကျတဲ့အာရုံကြောအဆောက်အဦများသတ်သတ်မှတ်မှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်, ဥပမာရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဖျန်ဖြေဆိုကြသည်နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါအပြုအမူ၏ status သင့်လျော်သောအမူအကျင့် assay နှင့်အတူအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင်လုပ်ဖို့အုပ်စုများကိုသူတို့အမူအကျင့်တာဝန်များကိုကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်တိုင်းတာနိုင်အသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်နေတုန်းသင့်လျော်သောအာရုံကြောဆုံးအဖွတျကျြောငြင်းခုန်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖိတ်ခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကိစ္စရပ်များ, နောက်ဆုံးမှာ, စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်သိတော့ယုံကြည်သည်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တိရစ္ဆာန်အမှန်တကယ်သိရှိလာမှသာတိုက်ရိုက်သင်ယူမှုများ၏ content စုံစမ်းကြောင်း assay အားဖြင့်ထင်ရှားစေနိုင်သောအရာ, တိရစ္ဆာန်အမှန်တကယ်သိရှိလာသောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။
တိရစ္ဆာန်နေပါစေစမ်းသပ်အစီအစဉ်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတူညီတဲ့အရာ (ထိုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားပြောဆိုထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့) သင်ယူဖို့စီမံခန့်ခွဲလျှင် Pavlovian-ဆာဂုဏ်ထူး, အသေးအဖွဲကြပြီ။ ယနေ့ neuroscience မှမရရှိနိုင်သင်ယူခြင်း၏အသုံးအများဆုံးအစီအမံအသုံးပြုခြင်း, ပြောပြစရာလမ်းရိုးရှင်းစွာရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်သုတေသီများမကြာခဏမေးခှနျးအတှကျအပြုအမူပန်းတိုင်သို့ဦးတည်ညွှန်ကြားတကယ်တော့ရှိမရှိဆန်းစစ်မပါဘဲရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူလေ့လာဖို့ဆိုကြသည်။ သင်ယူမှုအမျိုးမျိုးလေ့ပိုပြီးမကြာခဏသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ယူဆချက်တစ်ခုလုံလောက်သောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပေးရန်ပျက်ကွက်မထက်, ကွဲပြားခြားနားသော '' တာဝန်များကို 'သို့မဟုတ်' 'Paradigm' '၏အသုံးပြုမှုကိုကနေရလဒ်မှယူဆနေကြသည်ပေမယ့်။
ဤပြဿနာများ၏အဖြေဂန္ဥပမာသင်ယူမှုလေ့လာဖို့ဝင်္၏အသုံးပြုမှုသည်။ ဝင်္စမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ် assay နှင့်အတူတစ်ခုမှာပြဿနာ, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးများကဲ့သို့စမ်းသပ်သည့် Pavlovian (နှိုးဆွ-ဆုလာဘ်) ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု dissociating များ၏အခက်အခဲနှင့်ဆာ (action ကို-ဆုလာဘ်) ဖြစ်ပါသည်အပြုအမူကဆက်ပြောပါတယ် (Dickinson, 1994; ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2002) ။ ထို့ကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာရဖို့တစ်ဦးသည် T-ဝင်္မှတဆင့်ရွေ့လျားနေတဲ့တုန့်ပြန်မဟာဗျူဟာ (လက်ဝဲလှည့်) သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာ cue-အစားအစာအသင်းအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားအချို့အပို-ဝင်္မှတ်တိုင် (ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ conditional ချဉ်းကပ်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်Restle, 1957) ။ အဆုံးစွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိမရှိစမ်းသပ်တစ်ခုမှာနည်းလမ်းဝင်္ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်; ယခုတုံ့ပြန်မှုသင်ယူသူညာဘက်လှည့်သင့်တယ်အပို-ဝင်္တွေကိုသုံးပြီးသူတို့အားသော်လည်းကျန်ရစ်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဆက်လက်သငျ့သညျ။ သို့သော်တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပြီးဒါမှမဟုတ်သူတို့မျှသာအချို့ချဉ်းကပ်နေကြတယ်တကယ် left ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဆက်လက်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည် အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ် -maze cue? အပြုအမူ၏ Pavlovian ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းထိန်းချုပ်မှုကိုအလွယ်တကူဝင်္လေ့လာမှုများအတွက်လျှောက်ထားမရနိုငျသောကွောငျ့ကထွက်ရှာတွေ့မှရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအထဲမှတစ်ဦးသည် bidirectional ထိန်းချုပ်မှု, (တိရိစ္ဆာန်များဆုလာဘ်ဝင်ငွေမှတုန့်ပြန်၏ညှနျကွား၏ပယ်ဖျက်ခံရလိုအပ်သဖြင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်နိုင်သည်ကိုတည်စေHershberger, 1986; Heyes နှင့် Dawson, 1990) ။ တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လက်ရှိစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ဆုလာဘ်ကြားဆက်ဆံရေး extinguishing နှင့်အခြားနှင့်အတူကအစားအားဖြင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ကံမကောင်းစွာ, တစ်ဦးဝင်္အတွက်တုန့်ပြန်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်နေဆဲရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထား, အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်ထောင်ရန်လုံလောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ, အထူးသဖြင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဝင်္ cue ချဉ်းကပ်တဲ့ကြွက်ကဆုလာဘ်နှင့်အတူတွဲမဟုတ်တော့ကြောင်း, တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်စဉ်အတွင်းလေ့လာသင်ယူ, ဒါပေမယ့်တခြားစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်ကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဆီသို့ဦးတည်ကာချဉ်းကပ် CR လေးလည်းမှုကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ပုံအစဉ်အဆက်တုံ့ပြန်မှု-ဆုလာဘ်အရေးပေါ် encoded ဘဲလျက်မပါဘဲသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု reverse နိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမရနိုငျသောကွောငျ့, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာရန်ဝင်္, နေရာ preference ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းသော locomotor အလုပ်များကိုအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်နှင့်မည်သည့်အာရုံကြောများ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သည့်ဖြစ်စဉ်များ mischaracterizing မှုဖွယ်ရှိသည် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုတွေ့ရှိဖြစ်စဉ်များ (Smith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000; ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2002; Atallah et al ။ , 2007).
နျူကလိယ accumbens ဆာပသင်ယူမှုအဘို့မလိုအပ်ပါဘူး
လက်ရှိအမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဓာတ်အားမလုံလောက်မှုအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏လေ့လာမှုမှာအထူးသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ အတော်များများကလေ့လာမှုများကဒီဖွဲ့စည်းပုံရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ၏ဝယ်ယူဘို့အရေးပါကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ (ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2002; goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2005; Pothuizen et al ။ , 2005; Taha နှင့်လယ်ကွင်းများ, 2006; Atallah et al ။ , 2007; et al အားပေးစရာ။ , 2007; Lerchner et al ။ , 2007) ။ သို့သော်ဤနိဂုံးချုပ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သည့်အရေးပေါ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသောတာဝန်များကိုသုံးပြီးတစ်ယောက်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အပြောင်းအလဲအစီအမံအပေါ်အကြီးအကျယ်အခြေစိုက်ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။ တစ်ဦးကိုင်တွယ်တချို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဝယ်ယူတဲ့သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုညွှန်ပြနိုင်ချို့ယွင်းသောလေ့လာရေးသော်လည်း, သူတို့သည်လည်းတုန့်ပြန်စတင်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, နှိပ်လီဗာ၏ဝယ်ယူတစ်ခုချွတ်ယွင်းမကြာခဏ (စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ထက်သင်ယူခြင်းတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်Smith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000) ။ တစ်ဦးတည်းသိမ်းယူမှုခါးဆစ်, ဆိုသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏မပြည့်စုံကိုယ်စားပြုအဖြစ်, (သတိနဲ့အနက်ရမည်ဖြစ်သည်Gallistel et al ။ , 2004) ။ ကံမကောင်းစွာပဲသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, သင်ယူမှု၏လေ့လာမှုမှာဖြစ်ကောင်းအသက်အကြီးဆုံးသင်ခန်းစာ, အကြားခြားနားမကြာခဏယနေ့လျစ်လျူရှုနေပါတယ်။
တစ်ဦးကအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် accumbens လိုအပ်သောမဟုတ်သလိုဆာပသင်ယူမှုများအတွက်လုံလောက်သောမကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၏ accumbens ၏တွေ့ရှိရပါသည်က de Borchgrave et al, 2002 (ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှစွမ်းဆောင်ရည်၏ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး shell Corbit et al, 2001) သို့မဟုတ်နျဆာပအရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းမှ (Corbit et al, 2001), အ accumbens core ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပုနျဆာပအရေးပေါ် (၏ရွေးချယ်ပျက်စီးခြင်းဖို့ကြွက် '' sensitivity ကို impairing မရှိဘဲတန်ဖိုးမှ sensitivity ကိုလျှော့ချရန်တွေ့ပါပြီသော်လည်းCorbit et al ။ , 2001) ။ conditional အားဖြည့်များ၏လေ့လာမှုများအတွက်အသစ်တခုတုံ့ပြန်မှုများ၏ဝယ်ယူအပေါ် accumbens ထိန်းသိမ်းရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်သည်အခြားလေ့လာမှုများတသမတ်တည်းနှုန်း se တုံ့ပြန်၏ဝယ်ယူအပေါ်စိတ်ကြွဆေးများကစွမ်းဆောင်ရည်အထူးသဖြင့်တိုးမြှင့်, ဆုလာဘ်-related စွမ်းဆောင်ရည်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ပေမယ့်မ (ပါကင် et al, 1999) ။ အလားတူပင် Cardinal နှင့်ဖြစ်သောချုံကောင်းအားဖြင့်တစ်ဦးကိုစနစ်တကျလေ့လာမှုကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်အချိန်ဇယားကိုအောလီဗာစာနယ်ဇင်းတုံ့ပြန်မှုဝယ်ယူအပေါ် accumbens core ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့; ချို့ယွင်းဝယ်ယူသာ (နှောင့်နှေးအားဖြည့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်Cardinal နှင့်ဖြစ်သောချုံကောင်း, 2005).
အဆိုပါ accumbens ဆာပအရေးပေါ် encode ပါဘူးပေမယ့် (Balleine & Killcross, 1994; Corbit, Muir & Balleine, 2001), စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများကနျဆာပအတွက်အခြေခံကျသောအခန်းကဏ္ဍမှမအကြံပြု စွမ်းဆောင်ရည်ကျနော်တို့ယခုပိုကောင်းမကြာသေးမီအလုပ်၏အလငျး၌သတ်မှတ်နိုင်မယ့်အခန်းကဏ္ဍ။ အတော်ကြာလေ့လာမှုများအားဖြင့်ကောက်ချက်ချသကဲ့သို့, accumbens စာစားချင်စိတ်ကို Pavlovian အေးစက်အချို့အမျိုးအစားများများအတွက်အရေးပါသည်, ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်တွေကိုနျဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ရှိသည်နိုင်အဖြစ်တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေးအပေါ်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ဘက်လိုက်မှုထုတ်လုပ်သော Non-တိကျတဲ့ excitatory သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံး mediates ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုအားဖြင့်။ အဓိက၏, သို့မဟုတ် anterior cingulate ၏တွေ့ရှိရပါသည်, အဓိကရန် cortical ရဲ့ input ၏အဓိကအရင်းအမြစ်, သို့မဟုတ်ဤနှစ်ခုအဆောက်အဦများအကြားတစ်ဦးအဆက်ဖြုတ်, (Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူချို့ယွင်းပါကင် et al ။ , 2000) ။ တစ်ဦး D1 ကဲ့သို့ dopamine အဲဒီ receptor ရန်သို့မဟုတ်တစ် NMDA အချိုမှု receptor ရန်ဒေသခံပြုတ်ရည်သင်တန်းပေးခြင်းကိုလည်း (performance ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲသင်ယူမှု၏ဤပုံစံချို့ယွင်းချက်ချင်းပြီးနောက်Dalley et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များ၏အစီအမံတွေနဲ့သဘောတူ Vivo အတွက် အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ ဥပမာအားဖြင့်, Carelli နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက accumbens core ကိုအတွက်အာရုံခံတစ် Pavlovian autoshaping တာဝန်များ၏သင်ယူမှုကာလအတွင်းစနစ်တကျသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ (နေ့ et al ။ , 2006; နေ့နှင့် Carelli, 2007).
shell ကိုဒေသတွင်း၌အာရုံခံပင်ဆိုသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကိုမှီ, ဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှဖမ်းယူနားဆင်ခံရဖို့ပေါ်လာ; သူတို့သည်လည်းထိုအရလဒ်များ (ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း CSS မှတုံ့ပြန်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်Roitman et al ။ , 2005) ။ ထိုမှတပါး, Berridge နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအလုပ်မလုပ် နျူကလီးယပ်အတွင်းအချို့သောဒေသများ shell ကိုနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်း ventral pallidum ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အသွင်ပြင်လက္ခဏာစေခြင်းငှါ accumbens သောဖြစ်နိုင်ခြေထမြောက်တော်မူထားပါတယ် '' hedonic ဟော့စပေါ့။ ' ဤဒေသများတိုက်ရိုက်ထိုကဲ့သို့သောအရသာ reactivity ကိုအဖြစ်ဆုလာဘ်မှခြွင်းချက်မရှိ hedonic တုံ့ပြန်မှု, modulate ။ ဥပမာအားဖြင့်ဤဒေသများတွင် opioid receptors ၏ agonists သိသိသာသာ sucrose မှစားသုံးမိပါအရသာ reactivity ကိုများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ ထိုသို့သောအလွန်အမင်းဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဒေသများ, သို့သော်, (သူတွေရဲ့စားသောက်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍမကျယ်ပြန့်ကွန်ရက်မှာ embedded နေကြတယ်Taha နှင့်လယ်ကွင်းများ, 2005; Pecina et al ။ , 2006; Taha နှင့်လယ်ကွင်းများ, 2006).
core နဲ့ shell ကို၏ဆွေမျိုးအခန်းကဏ္ဍအတွက်ဂုဏ်ထူးအလွယ်တကူ Pavlovian အေးစက်၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများမှတဆင့်အတွေ့အကြုံကိုပြုပြင်နိုင်ပါသည်သောအသီးသီးအတွက်ကြိုတင်နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေအကြားတစျခုဖွစျဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါသူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူတွေကိုပိုပြီးတိကျတဲ့အာရုံခံအရည်အသွေးတွေနဲ့အတူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ကြိုတင်တုံ့ပြန်မှု, ရလဒ်များ၏ယေဘုယျစိတ်ခံစားမှုအရည်အသွေးတွေနဲ့အတူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိကြ၏ သူတို့ (ဥပမာကြိုတင်ပြင်ဆင်တုံ့ပြန်မှုပိုပြီးအလွယ်တကူရှည်ကြာချိန်နဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအေးစက်လျက်ရှိသည်ကိုလည်း CS အမျိုးမျိုးမှ differential ဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာKonorski၊ ၁၉၆၇; Dickinson နှင့် Dear, 1979; Balleine, 2001; Dickinson နှင့် Balleine, 2002).
မည်သည့်နှုန်းကိုမှာ Pavlovian အေးစက်အချို့ရှုထောင့်ရှိအ accumbens implicating အထောက်အထားလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသော amygdaloid အရေးပါနှငျ့ပတျသကျသောသူတို့အားအဖြစ်မပါဝင်မှသာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားကွန်ယက်များ, ကိုလည်း Pavlovian conditoning ၏နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကြိုတင်နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှဒါဟာပေါ်လာနေသည် (Balleine နှင့် Killcross, 2006).
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း accumbens မှစွပ်စွဲနိုင်တစ်ခုမှာ function ကိုဆာပအပြုအမူအပေါ် Pavlovian လွှမ်းမိုးမှုများ၏ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတဏှာနှင့် arousal အဖြစ်ဗဟိုစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ၏ activation ထင်ဟပ်ရှိသူများအပါအဝင် Pavlovian CRS, ဆာပလုပ်ရပ်များ (များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်Trapold နှင့် Overmier, 1972; Lovibond, 1983; ဟော်လန်, 2004) ။ ဥပမာ, လွတ်လပ်စွာအစားအစာဖြန့်ဝေခန့်မှန်းကြောင်း CS အလွန်တူညီအစားအစာများအတွက်တုံ့ပြန်ဆာပတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုလေ့ပု Pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်းပါရာဒိုင်း (သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့) ကို အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့သည်။ မြေတွင်း၌, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာနှင့်အတူတစ်ဦး cue ပေါင်းသင်းဖို့, လွတ်လပ်စွာ, သူတို့ကလေ့လာသင်ယူရသောသီးခြား Pavlovian နှင့်ဆာပလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်ကိုခံယူနှင့်အတူတူပင်အစားအစာများအတွက်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့။ ထိုအခါအာကာသယာဉ်စမ်းသပ်မှုတွေရက်နေ့တွင်, cue ရရှိနိုင်သည့်လီဗာနှင့်အတူပေးအပ်သည်နှင့် CS ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်တုန့်ပြန်မှုနှုန်း၏မြင့်တိုင်းတာသည်။ သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှစျယောကျပုံစံများကိုဖော်ထုတ်ပြီ ဆုလာဘ်-related တွေကိုများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်နှိုးဆွသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားသူများအားဆန့်ကျင်အဖြစ်ရိုသေလေးစားမှုတဦးတည်းသီးခြားဆုလာဘ်နဲ့ cue ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် status ကိုထုတ်လုပ်ရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တစ်စက္ကန့်ကိုပိုပြီးရွေးချယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှဆက်စပ်တဦးတည်း။ အဆိုပါ accumbens shell ကိုမြေတွင်း၏ဤအဆုံးစွန်သောရလဒ်-တိကျတဲ့ပုံစံများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ယခင်ပိုမိုယေဘုယျပုံစံများအတွက်လိုအပ်သောမဟုတ်သလိုရလဒ်တန်ဖိုးမှ sensitivity ကိုများအတွက်မရှိ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အ accumbens core ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးနှင့်တွင်း၏ယေဘုယျပုံစံနှစ်ခုလုံးမှ sensitivity ကိုလျှော့ချပေမယ့်နဂိုအတိုင်းရလဒ်ကို-တိကျတဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့စွန့်ခွာCorbit et al ။ , 2001; (Balleine နှင့် Corbit, 2005).
အဆိုပါ accumbens ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်ပေးအပ်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု (ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့မြေတွင်း၌ ShellWiltgen et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ striatum အတွက်တက်ကြွစွာကယ်လစီယမ် / calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase II ကို (CaMKII) ၏ထိန်းချုပ်ရာစကားရပ်ဆာသို့မဟုတ် Pavlovian သင်ယူမှုကိုထိခိုက်ပေမယ့်တိကျတဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဖျက်သိမ်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့၌ဤလိုငွေပြမှုအမြဲတမ်းမဟုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေပြမှုကိုသာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သရုပ်ပြ, doxycycline အတူ Transgene စကားရပ်ပိတ်ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းပြန်နိုငျသညျ။ သူတွေဟာလုပ်ကွက်ထို့ကြောင့် Pavlovian ထံမှဆာစနစ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက် striatum အတွက် CaMKII များ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ CaMKII Transgene အပေါ်လှည့်ကိုလည်း Basal ဂီယာသို့မဟုတ် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, အ accumbens shell ကိုအတွက်အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ dorsal striatum
ထို့အပြင် neostriatum သို့မဟုတ် caudate-putamen အဖြစ်လူသိများအဆိုပါ dorsal striatum, ဒါခေါ် neocortex ထဲကနေကြီးမားတဲ့စီမံချက်များလက်ခံ၏။ ဒါဟာနောက်ထပ်ပိုပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဖြစ်သောကြွက်များတွင် ventral striatum ပိုမို medial နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သည့်တွဲဖက်ဒေသနှင့်တစ်ဦး sensorimotor ဒေသတွင်းသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် (Groenewegen et al ။ , 1990; ယောလနှင့် Weiner, 1994). တစ်ဖွဲ့လုံးသည်အတိုင်း, dorsal striatum အဆိုပါ substantia nigra ပိုဒျ compacta အ (SNc) မှ DA ဆဲလ်များက innervated သည်သာ VTA DA အာရုံခံထံမှမဖြစ်စလောက်စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံ (ယောလနှင့် Weiner, 2000) ။ အဆိုပါ dorsal striatum အပေါ်ယခင်အလုပ်အများအားဖြင့်နှိုးဆွ-တုံ့ပြန်မှု (SR) အလေ့အထသင်ယူခြင်း (၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်Miller က 1981; အဖြူ, 1989) ။ ဒီအမြင်ဟာဆုလာဘ်အားကောင်းလာစေရန်, ဒါမှမဟုတ်အားဖြည့်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စိတ်သဘောထားမြား၏ရှေ့တော်၌အကြောင်းတုန့်ပြန်တိုးဖျော်ဖြေဖို့ရာ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖျော်ဖြေတုံ့ပြန်မှုများအကြားတစ်ဦး SR အသင်းအဖွဲ့မှပြုမူအရသိရသည်သော, အကျိုးသက်ရောက်၏တရားအပေါ်အခြေခံသည် လှုံ့ဆော်မှု (Thorndike, 1911; Hull, 1943; Miller က 1981) ။ အရှင် corticostriatal လမ်းကြောင်း (DA ဟာအားဖြည့် signal ကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နှင့်အတူ SR သင်ယူမှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထင်နေသည်Miller က 1981; Reynolds ကနှင့် Wickens, 2002).
SR မော်ဒယ်များစွမ်းဆောင်ရည်သို့သင်ယူခြင်းဘာသာပြန်ဆိုများအတွက် parsimonious အုပ်ချုပ်မှုကိုင်များ၏အားသာချက်ရှိသည်။ အဆိုပါယုံကြည်ချက် "လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကရလဒ်အိုစေပါတယ်" သေချာပေါက်အရေးယူမှုသို့ဘာသာပြန်ထားသောခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ action ကို-ဆက်စပ်မျှော်လင့်ထားအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကမော်ဒယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ် (Guthrie၊ ၁၉၃၅; Mackintosh, 1974); ဒီလိုမျိုး၏သတင်းအချက်အလက် '' တစ်ဦးက '' ဖျော်ဖြေဖို့နဲ့ 'တစ်ဦးက' 'ဖျော်ဖြေရှောင်ရှားရန်နှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ရိုးရာသီအိုရီအရှိဆုံးသိသာရှင်းပြချက်-အမည်ရတိရိစ္ဆာန်များရွေးချယ်မှုအပြုအမူလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်ဆည်းပူးနိုင်မရှောင်သောသူဖြစ်၏။ နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏တရား (တစ်သိသိသာသာတည်းဖြတ်မူမြင်ကြပြီအဒမ်, 1982; Colwill နှင့် Rescorla, 1986; Dickinson, 1994; Dickinson et al ။ , 1996) ။ T ကဆာလုပ်ရပ်များအမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထား, ဆိုလိုသည်မှာဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲမှုများမှအထိခိုက်မခံအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်သောသူမူကားများစွာသောလေ့လာမှုတွေ၏ရလဒ်များသရုပ်ပြပါပြီ (Dickinson & Balleine, 1994 တွင်ကြည့်ပါ။ 2002; Balleine, 2001 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာစဉ်ဆက်မပြတ်အခြေအနေများအောက်တွင်ကျယ်ပြန့်လေ့ကျင့်ရေး၏သင်တန်းကျော်ပင်အသစ်ဝယ်ယူလုပ်ရပ်များ (အတော်လေးအလိုအလျှောက်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု-မောင်းနှင်-တစ်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်လူသိများသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်အဒမ်နှင့် Dickinson, 1981; အဒမ်, 1982; ယဉ် et al ။ , 2004) ။ အရှင်သတ်မှတ်ထားသောအလေ့အထများအလိုအလျောက် antecedent လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းခံရ, ရလဒ်များ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုမှုကထိန်းချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်, သူတို့ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးပြောင်းလဲအကျိုးဆက် impervious ဖြစ်ကြသည်။ ဒီရှုထောင့်ကနေအကျိုးသက်ရောက်၏တရားထို့ကြောင့်သာလေ့အပြုအမူသက်ဆိုင်ကြောင်းအထူးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ဆာအပြုအမူ၏လက်ရှိခွဲခြားနှစ်ခုအတန်းထဲသို့အပိုင်းသုံးပိုင်း။ T ကသူကပထမဦးဆုံးအတန်းအစားပုနျဆာပအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်ထားရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များပါဝင်သည်; ရလဒ်တန်ဖိုးကပြောင်းလဲမှုများမှ impervious ဒုတိယလေ့အပြုအမူ (စားပွဲတင် 1) ။ ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးနှင့်ဆာပအရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းများကဲ့သို့အပြုအမူ assay အသုံးပြုခြင်း, ယဉ် et al (ထို dorsal striatum ရဲ့ sensorimotor (dorsolateral striatum, DLS) နှင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒေသများအကြားတစ်ဦး functional dissociation (dorsomedial striatum, DMS) ထူထောင်ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2004; ယဉ် et al ။ , 2004, 2005a; ယဉ် et al ။ , 2005b; ယဉ် et al ။ , 2006a) ။ အဆိုပါ DLS ၏တွေ့ရှိရပါသည်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်၏တစ်ဦးထက်ပိုရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြား mode မှာရရှိလာတဲ့, အလေ့အထများ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအာရုံချို့ယွင်း။ အဆိုပါ DMS ၏တွေ့ရှိရပါသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်လေ့ထိန်းချုပ်မှုမှဂိုးညွှန်ကြားနေတဲ့ switch ကိုဖြစ်ပေါ်။ ယဉ် et al အဆိုပါ DLS နှင့် DMS function သူတို့ support ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဆောက်အဦအမျိုးအစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ dissociated နိုင်ထို့ကြောင့်နိဂုံးချုပ်: အ DMS ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှာမှီးခြင်းနှင့်စကားရပ်ဘို့အရေးကြီးသည်သော်လည်းအဆိုပါ DLS, အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အရေးကြီးသည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ဥပမာတိုးချဲ့လေ့ကျင့်ရေး) အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်လုပ်ရပ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုလူ့ neuroimaging အပါအဝင် DLS-မှီခိုစနစ်, မျောက်ဝံများအပေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစာပေနှင့်အတူကျယ်ပြန့်သဘောတူညီမှုအတွက်သောနိဂုံးချုပ်, (ရန် DMS-မှီခိုမှုစနစ်ကနေ shift နိုငျသညျ, ကြောင်းခန့်မှန်းHikosaka et al ။ , 1989; Jueptner et al ။ , 1997a; Miyachi et al ။ , 1997; Miyachi et al ။ , 2002; Delgado et al ။ , 2004; Haruno et al ။ , 2004; Tricomi et al ။ , 2004; Delgado et al ။ , 2005; Samejima et al ။ , 2005; Haruno နှင့် Kawato, 2006a, b; Lohrenz et al ။ , 2007; Tobler et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာ t ကို, သင်တန်း, အောကျမေ့ရပါမည်တစ်ဦးတည်းဦးထုပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာ (ဥပမာ dorsal သို့မဟုတ် ventral) ကိုကြွက် striatum နှင့်မျောက် striatum နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းညွှန်မဖွစျနိုငျ; ထိုကဲ့သို့သောနှိုင်းယှဉ်ဟာခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု၏သတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်, သတိနဲ့လုပ်ရပါမည်။
dorsal striatal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှု accumbens ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ် (Smith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000; Atallah et al ။ , 2007) ။ ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, တစ်ဦးအမူအကျင့်ကိုတည်ထောင်ဘို့စံစမ်းသပ်မှု '' ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြား '(action ကို-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်၏ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးနှင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့Dickinson နှင့် Balleine, 1993) ။ အဆိုပါ DMS ၏တွေ့ရှိရပါသည် (နှစ်ဦးစလုံးထိန်းသိမ်းရေးမှအာရုံမခံစားနိုင်သောအပြုအမူဆပ်ယဉ် et al ။ , 2005b), အ accumbens core ကိုသို့မဟုတ် shell ကို၏တွေ့ရှိရပါသည် (မကျင့်သော်လည်းCorbit et al ။ , 2001) ။ ထို့ပြင်ဤအမူအကျင့် assay ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုပုံမှန်အားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အသစ်ကသင်ယူမှုများကညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသင်ယူခဲ့ရာအကဲဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဆိုဆုလာဘ်၏တင်ဆက်မှုခြင်းမရှိဘဲ, မျိုးသုဉ်းအတွက်ကောက်ယူနေကြသည်။ သူတို့က, အရှင်တိုက်ရိုက်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သည့်ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းပုံမှာစုံစမ်း။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်မကြာခဏဆုလာဘ်အမှန်တကယ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏-The ထားတဲ့အတွက်သီးခြားတန်ဖိုးစမ်းသပ်ဒါခေါ်လုပ်ဆောင်သွားရန်အသုံးဝင်သည် '' ဆုခခြံစမ်းသပ်။ ' လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအပေါ်တစ်ဦးတန်ဖိုးရလဒ်ကိုဆက်ပြောပါတယ်များ၏ပို့ဆောင်မှုလွတ်လပ်စွာအရေးယူ-ရလဒ်ကို encoding က၏အရေးယူမှုဖိနှိပ်လို့ရပါတယ်ကတည်းကမျှော်လင့်ထားရပါမည်ကဲ့သို့သော DMS ၏တွေ့ရှိရပါသည်, အကြိုးကို ပေး. စမ်းသပ်အပေါ်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှ sensitivity ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါဘူး။ accumbens core ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်မှုအပေါ်တန်ဖိုးမှ sensitivity ကိုဖျက်သိမ်းသော်လည်း shell ကိုတွေ့ရှိရပါသည် Accumbens, အခြားတစ်ဖက်တွင်သည်, မျိုးသုဉ်းစမ်းသပ်မှုဒါမှမဟုတ်ကြိုးကို ပေး. စမ်းသပ်ဖြစ်စေအပေါ်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှ sensitivity ကိုအယှက်မပြုခဲ့Corbit et al ။ , 2001) ။ အရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းမှ sensitivity, သို့သော်, accumbens ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်, ကြွက်ဝှက်ဖို့နဲ့အရေးယူ-ရလဒ်ကိုကိုယ်စားပြု retrieve နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ထိုသရုပ်ပြ, တစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြောင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရပါဘူး။
dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: nigrostriatal vs. Mesolimbic
အစဉ်အဆက်မျောက်တွေကို DA အာရုံခံ၏ phasic လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ရှေ့ဆောင်လေ့လာမှုများကတည်းကလယ်ပြင်၌ရှိသောဘုံယူဆချက် (အားလုံး DA ဆဲလ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တူညီသောလမ်းအတွက်ပြုမူသောကွောငျ့ဖွစျသညျSchultz, 1998a; ဂူ et al ။ , 2004) ။ သို့သော်မရရှိနိုင်ပါဒေတာ, အဖြစ်ခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု, မဟုတ်ရင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, striatum အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏အထက်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်ကောင်းစွာ midbrain အတွက် DA ဆဲလ်တွေတိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။
VTA နှင့် substantia nigra ပိုဒျ compacta အ (SNc): DA ဆဲလ်နှစ်ခုအဓိကအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ယင်းအနေဖြင့်အနာဂတ်ပေမယ့် accumbens မှ VTA ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်သင်ယူမှု၏လယ်ပြင်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုခဲ့သည့်အများကြီးပိုကြီးမား nigrostriatal လမ်းကြောင်းအတော်လေးလျစ်လျူရှုထားပြီး, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အဓိကအားအာရုံစူးစိုက်။ ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်လက်ရှိစဉ်းစားတွေးခေါ် သင်ယူမှုအတွက် DA အကြီးအကျယ် DA ဆဲလ်များ၏ phasic လှုပ်ရှားမှုအကျိုးကိုခန့်မှန်း erro ထင်ဟပ်သောအဆိုပြုချက်ကလွှမ်းမိုးထားသည်r (Ljungberg et al ။ , 1992; Schultz, 1998b) ။ ငါSchultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသုံးပြုဎအသုံးအများဆုံး Pavlovian အေးစက်တာဝန်အဲဒီအာရုံခံ (ယူအက်စ်) ဆုချမှတုန့်ပြန်ပစ်ခတ်ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုနှင့်အတူအမေရိကန်-evoked လှုပ်ရှားမှုဟာ CS မှပြောင်းရွှေ့နေသည်။ အမေရိကန်လေ့လာပြီးနောက်ချန်လှပ်ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, DA ဆဲလ်က၎င်း၏ပေးပို့များ၏မျှော်မှန်းအချိန်ကလှုပ်ရှားမှုထဲမှာအကျဉ်းစိတ်ကျရောဂါကိုပြသ (Waelti et al ။ , 2001; Fiorillo et al ။ , 2003; Tobler et al ။ , 2003) ။ ထိုသို့သောဒေတာ (Computer မော်ဒယ်များအမျိုးမျိုး၏အခြေခံဖွဲ့စည်းSchultz et al ။ , 1997; Schultz, 1998b; ဘရောင်း et al ။ , 1999; ဂူ et al ။ , 2004).
တဦးတည်းမြင့်မားဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့အဲဒီနှစျခုအစီအမံမျှော်လင့်ထားမယ်လို့သော်လည်းပေါင်းစပ်၏ယန္တရားထဲမှာထိန်းချုပ်မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်ပေးသောနှင့်ဖြန့်ချိ, DA အာရုံခံ၏ Spike, DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူပမာဏမှာတူညီမရနိုင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry သုံးပြီး Carelli နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကမကြာသေးမီလေ့လာမှုအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း အဆိုပါ accumbens core ကိုအတွက်အမှန်တကယ် DA လွှတ်ပေးရေးစာစားချင်စိတ်ကို Pavlovian အေးစက်အတွက်ခန့်မှန်းအမှားဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ပုံပေါ် (နေ့ et al ။ , 2007) ။ သူတို့ကချက်ချင်း Pavlovian autoshaping အတွက် sucrose ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိပြီးနောက် accumbens core ကိုတစ်ဦး phasic DA signal ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တိုးချဲ့ Pavlovian အေးစက်ပြီးနောက်, သို့သော်ဒီ signal ကိုမရှိတော့အကျိုးကိုကိုယ်နှိုက်ပြီးနောက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အစား CS မှပြောင်းရွှေ့။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်မူလ '' ခန့်မှန်းအမှား '' အယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ (ကိုလည်း accumbens core ကိုအတွက် DA အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ် DA လျော့ကျဖြစ်စေပြီးနောက် Pavlovian CR ၏ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖေါ်ပြခြင်းအစောပိုင်းကအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်di Ciano et al ။ , 2001; ပါကင် et al ။ , 2002) ။ သို့သော်လေ့လာမှုကနေတဦးတည်းလေ့လာရေးအသစ်နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါသည်: ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးတဲ့ CS-, အလားတူခန့်မှန်းကြောင်း CS + ဖြင့်တိုးချဲ့အေးစက်ပြီးနောက်, သေးငယ်, DA signal ကိုလည်းသော်လည်း, ထို CS- ပြီးနောက်ရှုလေ့လာခဲ့သည်သော်လည်း ဒါကြောင့်လည်း (ကနဦးအထွတ်အထိပ်ပြီးနောက် (500 ~ 800 cue စတင်ခြင်းပြီးနောက် milliseconds) ချက်ချင်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာပြသနေ့ et al, 2007, ပုံ 4) ။ သင်ယူမှုအတွက်ဤအဆင့်အားဖြင့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် CS- ချဉ်းကပ်ပေမယ့်တစ်သမတ်တည်းအဆိုပါ CS + ချဉ်းကပ်နီးပါးဘူး။ ဒါကြောင့်ပင်တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကထို့ကြောင့်ချက်ချင်းခန့်မှန်းပြီးနောက် phasic DA signal ကို, ထိုချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်အတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော signal ကိုအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အရေးပေါ်သင်ယူဘို့နေဆဲလိုအပ်သောရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်နေဆဲပေမယ့် CS- ဖို့လေ့လာတွေ့ရှိ phasic တုံ့ပြန်မှုဆက်ဆက်လက်ရှိမော်ဒယ်မဆိုအားဖြင့်ခန့်မှန်းသည်မဟုတ်။
စိတ်ဝင်စားစရာဒေသခံ DA လျော့ကျ (ဒီတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်မပါကင် et al ။ , 2002) ။ ဒေသခံတွေပျက်စီးမှုအားဖြင့် phasic နှင့်လုပ်သူများ DA နှစ်ဦးစလုံးဖျက်သိမ်းခြင်းမှာအားလုံး CRS generate ပါဘူးသော CS-, CRS များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်မပြီးနောက် phasic DA signal ကိုလေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်သွားရမည်။ (ယူဆရလျော့ကျလေ့လာမှုများအတွက်ဖျက်သိမ်း) တစ်ဦးနှေးကွေးပိုလုပ်သူများ DA signal ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုအရေးကြီးသည်စဉ်ထိုသို့သောပုံစံ, အ accumbens အတွက် phasic DA signal ကိုပု Pavlovian CR ၏စွမ်းဆောင်ရည်အဘို့မလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါ ယင်းချဉ်းကပ်မှုတုံ့ပြန်မှု (၏Cagniard et al ။ , 2006; ယဉ် et al ။ , 2006b; ထို et al ။ , 2007) ။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေကိုစမ်းသပ်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
သင်ယူမှုအတွက် phasic DA signal ကိုတစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍစရာတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေရှိပေမယ့်သူကအတိအကျသင်ယူမှု၏ထင်ရှားတဲ့မော်ဒယ်များမှာအသုံးပြုတဲ့သင်ကြားမှု signal ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်, '' ခန့်မှန်းအမှား '' အယူအဆလက်ထက်, အများကြီးအာရုံစိုက်မှုဆွဲဆောင်ခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့သော Rescorla-Wagner မော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏ Real-time extension ကိုအဖြစ်ယာယီခြားနားချက်အားဖြည့်သင်ယူမှု algorithm ကို (Schultz, 1998b) ။ ဒီအနက်အဆိုအရ, အစာစားချင်စိတ်သင်ယူမှု (သို့မဟုတ်နှစ်ခုယာယီအဆက်ဆက်ဆုလာဘ်ဟောကိန်းများကြား) ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်များအကြားကွာခြားချက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသင်ကြားမှု signal ကို (အကျိုးကိုအပေါငျးတို့သခန့်မှန်းခြင်းမှအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်Schultz, 1998b). အကျိုးကိုမခံရသည့်ခန့်မှန်းအောက်ပါအတိုင်းလျှင်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားဟာ DA အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးသို့ကျဆင်းလာအဖြစ် unmasked ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ယူမှုဟာခန့်မှန်းအမှားများ၏တိုးတက်သောလျှော့ချရေးပါဝငျသညျ။
ဤအမော်ဒယ်များအတွက်သင်ကြားရေး signal ကို၏ကြော့ရှင်းဖြစ်ကောင်းခန္ဓာဗေဒအဖြစ်မှန်ကနေတချို့အာရုံသိရသည်။ အားဖြင့်လေ့လာမှုမှာ နေ့ et al (2007)အဆိုပါ accumbens အတွက် DA signal ကိုပု VTA အတွက်ဆဲလ်အနေဖြင့်များသောအားဖြင့်ကြွလာ, ဒါပေမယ့်တခြား DA ဆဲလ်တွေ, လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ, တူညီတဲ့တုန့်ပြန်ပရိုဖိုင်းကိုပြသခြင်းနှင့်အတူတူပင် signal ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ တစ်ဦးကအဆိုပါ DA ဆဲလ်အချက်ပြအဘယ်အရာအတွက် gradient ကို DA ဆဲလ်တွေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားသော striatal ဒေသများမှပရောဂျက်များနှင့်ခံယူကတည်းကပိုမိုဖွယ်ရှိသည်, အလှည့်အတွက်ကွဲပြားအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်အချက်ပြမှုများကိုကွဲပြားခြားနားသော striatal ဒေသများထံမှအဖြစ်ကောင်းစွာ (ယောလနှင့် Weiner, 2000; Wickens et al ။ , 2007) ။ လွှာမှနှင့်ပျက်စီးခြင်း၏ယန္တရားများအဖြစ် dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိသော presynaptic receptors ကိုလည်း (ထို striatum ဖြတ်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအပြောင်းအလဲပြသCragg et al ။ , 2002; ဆန်နှင့် Cragg, 2004; Wickens et al ။ , 2007; ဆန်နှင့် Cragg, 2008).
ကျနော်တို့ nigrostriatal လမ်းကြောင်းလုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးများကိုလေးလည်းရှိနျဆာပသင်ယူမှုပိုမိုအရေးကြီးသည်သော်လည်းအဆိုပါ mesoaccumbens လမ်းကြောင်း, ပြည်နယ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တန်ဖိုးကိုလေးလည်းအတွက် Pavlovian သင်ယူမှုအတွက်ပိုပြီးကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍကြောင်း, ဒါကြောင့်, တင်ပြသည်။ Tဦးထုပ်သည်လက်ရှိတွင်ယူဆနေသည်အဖြစ် phasic DA signal ကိုကွဲပြားခြားနားခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများထက်တစ်ခုတည်းခန့်မှန်းအမှားဝှက်နိုငျသညျ, ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားသုံးခုလိုင်းများဤဆင်ခြေကိုထောကျပံ့။ mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် DA တွေပျက်စီးမှုမသော်လည်းပထမ, nigrostriatal လမ်းကြောင်းအတွက် DA ၏မျိုးဗီဇတွေပျက်စီးမှု (ဆာလုပ်ရပ်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းSotak et al ။ , 2005; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2007) ။ ဒုတိယ, SNc အတွက် DA ဆဲလ် (သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ် striatal ဒေသတွင်ဆဲလ်အလားတူလုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုး, ဝှက်မည်အကြောင်းမောရစ် et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ DLS ဖို့ nigrostriatal စီမံကိန်း၏တတိယရွေးချယ်တွေ့ရှိရပါသည် (အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးချို့ယွင်းFaure et al ။ , 2005).
Palmiter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကမကြာသေးမီအလုပ်မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာ DA လစ်လပ်ကြွက်ပြင်းထန်စွာဆာပသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ချို့ယွင်းလျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က L-DOPA ဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ် nigrostriatal လမ်းကြောင်း (မှဗိုင်းရပ်စ်မျိုးဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေပွနျလညျထူထောငျနိုင်ကြောင်းပြသSotak et al ။ , 2005; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2007). ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အ ventral striatum အတွက် DA ပွနျလညျထူထောငျဆာပအပြုအမူ restore လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်လို DA အချက်ပြမှုများဆာပသင်ယူမှုတစ်ခုပွင့်လင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြစ်နေဆဲ enable ပေမဲ့လည်းတဦးတည်းသိသာဖြစ်နိုင်ခြေကဆုလာဘ်အရေးယူတဲ့အထူးသင်တန်းပေးထားသောဟောကိန်းထုတ်နေပါတယ်ဘယ်လောက် Self-အစပျိုးလုပ်ရပ်များ, ဆိုလိုသည်မှာ၏တန်ဖိုးကိုဝှက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ dorsal striatum, တစ်ခုလုံးအတိုင်း, ဦးနှောက်ထဲမှာ DA receptors ၏အမြင့်ဆုံးစကားရပ်ပါရှိသည်နှင့်အများဆုံးအကြီးအကျယ် dopaminergic အနာဂတ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ။ အဲဒီနှစျခုဒေသများ DA လွှတ်ပေးရန်, လွှာမှနှင့်ပျက်စီးခြင်း (များ၏ယာယီပရိုဖိုင်းကိုသိသိသာသာကွာခြားအဖြစ် DMS ဖို့ DA Project, ပု DLS ဖို့အနာဂတ်ထက်သင်ယူမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်Wickens et al ။ , 2007). ကျနော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် SNc ထံမှ DLS ဖို့ DA projection အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အရေးကြီးသည်သော်လည်းအဆိုပါ medial SNc ထံမှ DMS ဖို့ DA Project, action ကို-ရလဒ်ကိုသင်ယူမှုများအတွက်အရေးပါကြောင်းကို hypothesize ။ ဤစကားမှန်ဖြစ်သင့်, တ SNc အတွက် DA ဆဲလ် Self-generated လုပ်ရပ်များ-ဆာပခန့်မှန်းအမှား-မဟုတ်ဘဲကြောင်းထက် CS အပေါ်အခြေခံပြီးအပေါ်အခြေခံပြီးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက်အမှားဝှက်ဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဤပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံပဏာမသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုနျဆာပသင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း SNc အာရုံခံကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောသူကိုမောရစ် et al, (ကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကနေကြွလာမောရစ် et al ။ , 2006) ။ မျောက်ဟာခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှု (S ကိုတုံ့ပြန်မှာသူတို့ရဲ့လက်နက်ရွှေ့ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်D) သောသင့်လျော်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုလာဘ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေညွှန်ပြ။ အဆိုပါ S ကD တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေးယူ၏မျှော်မှန်းဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်အခြေခံပြီး action ကိုတန်ဖိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် DA အာရုံခံအတွက် phasic လှုပ်ရှားမှုရူးနှမ်း။ အများစုမှာစိတ်ဝင်စားစရာညျ S ဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုပေမယ့်D အရေးယူတန်ဖိုးတိုးလာသည်ပြောင်းပြန်သည်ဤအာရုံခံကြောင့်တန်ဖိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ခန့်မှန်းချက်အမှားကုဒ်သွင်းခဲ့ကြသည်သောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီအကျိုးကိုကိုယ်နှိုက်ဖို့ DA တုံ့ပြန်မှုများ၏စစ်မှန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဲဒီဆဲလ်များ၏မူလတန်း striatal ပစ်မှတ်သည် caudate နျူကလိယ, (action ကိုတန်ဖိုးများကိုဝှက်ကြောင်းအာရုံခံဆံ့ဖို့လူသိများသည်Samejima et al ။ , 2005) ။ ဒီလေ့လာမှုတည်ပြီးသတ်တယ်လုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းအမူအကျင့်တာဝန်များကိုကိုအသုံးမပြုခဲ့ကြောင်း, သို့သော်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်တစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန့်မှန်း phasic DA လှုပ်ရှားမှုပင်တစ်ဦးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ S ကို၏မရှိခြင်းအတွက်လုပ်ရပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူလိုက်ပါလာကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်D။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဟာဆုလာဘ်ဝင်ငွေနဲ့ self-အစပျိုးလုပ်ဆောင်ချက်အချိန် nigral DA အာရုံခံ၏ပြင်းစွာတိုက်ပစ်ခတ်ရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။
အဆိုပါ mesoaccumbens DA signal ကိုပု CS ၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်သော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, ထို nigrostriatal signal ကို, ဖြစ်ကောင်း DMS မှထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအာရုံခံ မှစ. , action ကိုသူ့ဟာသူ၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်, သို့မဟုတ်မည်သည့် S က၏D ဒီတန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ဆာနှင့် Pavlovian နှစ်ဦးစလုံးသင်ယူမှုအတွက်ထိရောက်သောသင်ကြားမှု signal ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်အချို့ကိုပုံစံပါဝင်မှပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါ midbrain DA အာရုံခံ (ရန် striatum ထံမှတကယ်တော့တိုက်ရိုက်စီမံချက်များပုံ 2) ရှည်လျား (အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်၏ဤအမျိုးအစားများ၏အာရုံကြောအကောင်အထည်ဖော်မှုအဖြစ်အဆိုပြုထားပြီHouk et al ။ , 1995အဆိုပါ inhibitory input ကို၏), နှင့်အစွမ်းသတ္တိ, သဘောသဘာဝကိုကောင်းကောင်းဒေသကနေဒေသမှသိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည်။
အဆိုပါ cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ
တစ်ဦးကခန့်မှန်းအမှား, လက်ရှိမော်ဒယ်အရသိရသည်သင်ယူမှုဖြစ်ပေါ်ဘယ်လောက်ဆုံးဖြတ်သည်တဲ့သင်ကြားမှု signal ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တာရှည်ပါကလက်ရှိသည်အတိုင်း, သင်ယူမှုနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Pavlovian ခန့်မှန်းအမှားမှ syntactically ဆင်တူ, ကျယ်ပြန့်လေ့လာကြပြီမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားသော features တွေရှိပါတယ်သော်လည်းသို့သော်သိသာဤပြောဆိုချက်ကို, action ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုခန့်မှန်းအမှားပေါ်လာသည်။ သီးသန့် (ကန့်သတ်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူသော်လည်း) Pavlovian အေးစက်အမှာစကားပြောကြားပေးသော Rescorla-Wagner မော်ဒယ်များကဲ့သို့ရိုးရာမော်ဒယ်များမှာသော့ချက်အင်္ဂါရပ်ခန့်မှန်းအမှားထိန်းညှိသောအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကို output ပိုမိုအထူးသ, ထိုဝယ်ယူခန့်မှန်းကိုယ်စားပြုတယ် ငှေပေါငျး ပုံမှန်အားဖြင့်စမ်းသပ်ချက်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒြပ်ပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိအဖြစ်အားလုံးလက်ရှိခန့်မှန်း, (၏Rescorla, 1988) ။ ဒါဟာမော်ဒယ်၏ဤအတန်းထဲတွင်အကြီးတီထွင်ဆန်းသစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှားသက်တမ်းတည်ထောင်ရန်ရရှိနိုင်ပါခန့်မှန်း၏ဤကဉျြးခြုပျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်းသာအရေးယူမယ့်အချိန်ကဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ်အခါအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံလုပ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးကိုတင်ပြမယ်လို့ဘယ်လောက်ကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်ဆာပလုပ်ရပ်တွေကိုအဘို့, သို့သော်, တစ်ဦးချင်းအမှားအသုံးအနှုန်းများ, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပုံရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းနည်းများ၏နံပါတ်တည်ရှိကြဘူး။ ဥပမာ, (စမ်းသပ်မယ့်ကွဲပြား S ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ပြည်နယ်ပေးထားD), လုပ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသင်တန်းများအမှန်ပင်ဝယ်ယူဟောကိန်းများအဖြစ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဆာပခန့်မှန်းအမှားများနှင့်အတူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အခက်အခဲ action ကိုသူ့ဟာသူ၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက Pavlovian ခန့်မှန်းအလိုအလျောက်သက်ရှိများ၏လွတ်လပ်သောသောလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုအောက်ပါအတိုင်း။ အဆိုပါခန့်မှန်းအရေးယူ-ဆက်ပြောပါတယ်သူ့ဟာသူဖြစ်တယ်, တစ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်အရေးယူကောက်ကာငင်ကာသရုပ်ဆောင်မယ့်အစား antecedent လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်း၏အကျိုးဆက်များ၏တိရိစ္ဆာန်များ '' လိုက်စားအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်လွှတ်သောကြောင့်တစ်ဦးဆာပခန့်မှန်းအမှား, ထိန်းချုပ်မှု၏ဒြပ်စင်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဆုံး၌, ကတိကျစွာ Pavlovian နှင့်ဆာပသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအကြားခွဲခြားမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏သဘောသဘာဝမှုန်ဝါးတော်မူကြောင်းကို neuroscience နှင့်စိတ်ပညာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ, ၏အလိုအလျောက်သဘာဝတရား၏အထွေထွေလျစ်လျူရှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (action ကိုတန်ဖိုးများများဝယ်ယူထိန်းညှိအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် signal ကို၏ သို့ဖြစ်. အဘယ်အမျိုးအစားမဆိုလျှင်, တည်လိမ့်ရန်ဖြစ်နေဆဲဒါယန်းနှင့် Balleine, 2002).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြာသေးမီအလုပ်ကိုလည်းအလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အထူး DLS ဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် SNc ထံမှ nigrostriatal projection ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ Faure et al ရွေးချယ် (6-OHDA သုံးပြီး DLS မှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း DA ဆဲလ် lesioned နှင့်တိုင်းတာကြောင့်, အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးချို့ယွင်းသော်လည်းရလဒ်တန်ဖိုးသုံးပြီး, ဒီကိုင်တွယ်နှိပ်လီဗာနှုန်းအပေါ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရFaure et al ။ , 2005) ။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, lesioned တိရိစ္ဆာန်များတစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု, သင်တန်းရလဒ်ကိုတန်ဖိုးမှအာရုံမခံစားနိုင်သောလေ့အပြုအမူနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပင်သျော, တစ်ဦးရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထုံးစံ၌တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဒေသခံ DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ, သို့ဖြစ်လျှင်, DLS ၏ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆင်တူသည်, ထိုအတွက်ထိန်းသိမ်းရေးနှစ်ဦးစလုံး (အလေ့အကျင့်ဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ၏ဝယ်ယူမျက်နှာသာယဉ် et al ။ , 2004) ။ အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်အရေးပါတစ်ဦးက phasic DA signal ကိုပြီးသား Hull နဲ့ Spence (၏လုပျငနျးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခေတ်ပြိုင်ယာယီ-ခြားနားချက်အားဖြည့်သင်ယူမှု algorithms အတွက်ထိရောက်သောအားဖြည့် signal ကိုအားဖြင့်ကောင်းစွာဖော်ပြHull, 1943; Spence, 1947, 1960; Sutton နှင့် Barto, 1998).
Cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ
ဒီတော့ဝေးကျွန်ုပ်တို့ striatum အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဆွေးနွေးတင်ပြကြသေးပါကမည်သည့် striatal ဧရိယာဆို, ရှိသမျှသူ့ဟာသူလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသို့အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်အကြံပြုဖို့အထင်အမြင်မှားစေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနှောက် hemisphere cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များပါဝင်သည်ဟုအလုပ်လုပ်တဲ့ယူနစ် (iterating အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်အဲဒီအစားSwanson, 2000; Zahm, 2005) ။ T ကသူကထူးခြားတဲ့ cortical ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းဟာ cortico-Basal ganglia ကွန်ယက်ကို motif အတွက်အချက်အချာ, thalamic နှင့် midbrain သွင်းအားစုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, တစ်ခုလုံး Basal ganglia ၏ entry ကိုဘူတာရုံဖြစ်ခြင်း, striatum။ ကစဉ်ဆက်မပြတ်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်သော်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမတူညီတဲ့ striatal ဒေသများအတွက် accumbens အဆိုပါ limbic ကွန်ယက်တွင်တစ်ဦးအချက်အချာနှင့် sensorimotor ကွန်ယက်ကိုအတွက် DLS အဖြစ်ပြုမူဥပမာကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်များ၏ reentrant ပိုင်ဆိုင်မှုဖို့, သို့သော်, ဒီဖွဲ့စည်းပုံအဘယ်သူမျှအစိတ်အပိုင်းမဆိုအကြွင်းမဲ့အာဏာသဘောအရအထက်သို့မဟုတ်မြစ်အောက်ပိုင်းဖြစ်၏ ဥပမာပု thalamocortical စနစ် striatum ဖို့အဓိက input ကို၏အရင်းအမြစ်နှင့် striato-pallidal နှင့် striato-nigral လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံး၏ပစ်မှတ်နှစ်ခုလုံးပါပဲ။
အပြိုင် reentrant Basal ganglia ကွင်းရှည်လျားအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပေမယ့်လည်း (အလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1986), ကျနော်တို့စစ်ဆင်ရေးသတ်မှတ်ကိုယ်စားပြုအဆောက်အဦများနှင့် Integrated အပြုအမူတွေကိုထုတ်လုပ်အတွက်ဆားကစ်များအကြားအပြန်အလှန်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဤဆားကစ်၏ကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။ The Associated striatum (DMS) ပါဝင်သော The Associated ကွန်ယက်အသီးသီး accumbens ၏ shell ကိုနှင့်အဓိကပါဝငျသော limbic ကွန်ယက်များ, နှင့် sensorimotor striatum (DLS) ပါဝငျသော sensorimotor ကွန်ယက်ကို: ဤအခြေခံတွင်အနည်းဆုံးလေးထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်များသိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ (အစာစားချင်စိတ် Pavlovian URs နှင့် CRS ၏ထိန်းချုပ်မှုဖြန်ဖြေရာမှနျဆာပလုပ်ရပ်များအထိပုံ 1).
အဆိုပါ striatum ၏ဗိုလ်မှူးအလုပ်လုပ်တဲ့ဒိုမိန်းများ။ ဦးနှောက်တစ် Coronal အပိုင်းဖေါ်ပြခြင်းတဝက်ကနေ striatum ၏သရုပ်ဖော်ပုံ (Paxinos နှင့် Franklin, 2003) ။ ဤတရားလေးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့ domains များခန္ဓာဗေဒစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်နှင့်အကြမ်းအားဖြင့်ဘယ်အရာကိုမှကိုက်ညီတဲ့ ...
ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, ventral striatum နောက်ထပ်တစ်ဦးစီတစ်ဦးကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ယက်တွင်ပါဝင်သည့် shell ကိုနှင့်အဓိကသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်သောနျူကလိယ accumbens ၏အများစုပါဝင်သည်။ အဆိုပါ cortical (glutamatergic) ကိုအဓိကရန်အဆိုပြုချက်များကယင်း ventral နှင့် dorsal prelimbic တူသော prefrontal cortex ပို dorsal midline ဒေသများနှင့် anterior cingulate cortical (ထဲကပေါ်ထွန်းသော်လည်း shell ကိုမှ Project, infralimbic အလယ်ပိုင်းနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Orbital cortical ကနေပျေါပေါကျGroenewegen et al ။ , 1990; Zahm, 2000, 2005) ။ အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သောဤ function ကိုကွန်ရက်များသက်သေအထောက်အထားများအတွင်း shell ကိုဆုလာဘ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက် CRS များ၏ဝယ်ယူမှ URs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြု; ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူအတွက် core ကို, Pavlovian ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုများအထူးသဖြင့်ရှာမှီးခြင်းနှင့်စကားရပ်။ အနည်းဆုံးနှစ်ခုကိုအဓိကကွန်ယက်များ, ထို့နောက်, (Pavlovian အေးစက်ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်အပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်ပိုမိုကြီးမား ventral သို့မဟုတ် limbic cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်သူတွေရဲ့စားသောက်ဘို့တနှင့်အခြားအတွင်းသိနိုင်ပါသည်ပုံ 1).
အဆိုပါ dorsal striatum ထိုနည်းတူချင်းစီနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ကွဲပြား functional ဖြစ်စေ network ကနှင့်အတူအနည်းဆုံးနှစ်ခုအဓိကဒေသများ, အသင်းအဖွဲ့များနှင့် sensorimotor သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ The Associated striatum (caudate နှင့်မျောက်ဝံများအတွက် anterior putamen ၏အစိတ်အပိုင်းများ) (တုန့်ပြန်-ဆက်ပြောပါတယ်ဆုလာဘ်အတွက်မျှော်ပစ်ခတ်ကြောင်းအာရုံခံပါရှိသည်နှင့်မျှော်မှန်းဆုလာဘ်၏ပြင်းအားသည်နှင့်အညီ, သူတို့ပစ်ခတ်ရန်ပြောင်းလဲHikosaka et al ။ , 1989; Hollerman et al ။ , 1998; Kawagoe et al ။ , 1998) ။ The Associated ကွန်ယက်ကိုမှာ DMS အတွက် prefrontal နှင့် parietal အသင်းအဖွဲ့ cortical နှင့်၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်မကြာသေးမီ efference မိတ္တူ (၏စံချိန်တင်အဖြစ်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား၏ပုံစံ, အလားအလာများနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်နှစ်ဦးစလုံး, ယာယီမှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Konorski၊ ၁၉၆၇) ။ အဆိုပါ sensorimotor အဆငျ့, အခြားတစ်ဖက်တွင်, sensorimotor cortical နှင့် Basal ganglia မှာသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ပါဝင်သည်။ ဒီဆားကစ်၏အကျိုးရလဒ်များမော်တာ cortical နှင့်ဦးနှောက်ကို stem မော်တာကွန်ရက်များမှာညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ sensorimotor striatum အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုယေဘုယျအားဖြင့် (The Associated striatum အတွက်အာရုံခံထက်ပိုပြီးလှုပ်ရှားမှု-related လှုပ်ရှားမှုပြသ, ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းအားဖြင့် modulated မဟုတ်ပါKanazawa et al ။ , 1993; Kimura et al ။ , 1993; ကော်စတာ et al ။ , 2004) ။ မဟုတ်လုံလောက်သောဒေတာကိုမဆိုအသေးစိတ်ခွဲခြားခွင့်လက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် medial-lateral gradient ကိုအပြင်၌, dorsal striatum ရဲ့ anterior-posterior ဝင်ရိုးတလျှောက်သိသာအလုပ်လုပ်တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (ရှိ၏ယဉ် et al ။ , 2005b).
လေ့လာရေးယခုအချိန်အထိသာသည်ဤကွန်ရက်များ၏ cortical နှင့် striatal အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦး cortical ဧရိယာ၏တွေ့ရှိရပါသည် (၎င်း၏ striatal ပစ်မှတ်၏တွေ့ရှိရပါသည်အဖြစ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိBalleine နှင့် Dickinson, 1998; Corbit နှင့် Balleine, 2003; ယဉ် et al ။ , 2005b) ။ သို့သော်ကွန်ယက်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအလားတူလုပ်ဆောင်ချက်များကို subserve နိုင်ဘူး။ ဥပမာ, thalamus ၏ mediodorsal နျူကလိယ, The Associated ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏တွေ့ရှိရပါသည်, အ DMS နှင့် prelimbic cortex (ရန်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အဖြစ်အများကြီးအတူတူပင်လမ်းအတွက်ရလဒ်တန်ဖိုးနှင့်အရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းမှ sensitivity ကိုဖျက်သိမ်းဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်Corbit et al ။ , 2003) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေဘုယျမော်ဒယ်တစ်ဦးကွန်ယက်၏တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းပျက်စီးပြီးနောက်အလားတူအပြုအမူလိုငွေပြမှုခန့်မှန်းပေမဲ့ထို့ကြောင့်လည်း pallidum သို့မဟုတ် thalamus, မျိုးစုံအလုပ်လုပ်တဲ့ domains များကဲ့သို့အဆိုပေးထားသောဖွဲ့စည်းပုံအဘို့, အကြံပြုထားသည်။
အများဆုံးအခြေအနေများအောက်တွင်, Pavlovian နှင့်ဆာပသင်ယူမှုအပြိုင်နေရာယူပေါ်လာပါသည်။ သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့တူသောဖြစ်ရပ်သို့သော်ဤမဟုတ်ရင်ကွဲပြားဖြစ်စဉ်များအပြန်အလှန်နိုငျသောမှအတိုင်းအတာဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်သောအလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်များ delineated တော်မူပြီးမှ, လာမယ့်ခြေလှမ်းကဤစနစ်များအပြုအမူ generate မှညှိနှိုင်းနေကြသည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်းဆွဲဆောင်မှုအဆိုပြုချက်ကိုမကြာသေးခင်ခန္ဓာဗေဒအလုပ်နှင့်အညီ, သတင်းအချက်အလက်နောက်တစ်နေ့မှတဦးတည်းအဆင့်ကနေပြန့်ပွားဖို့ခွင့်ပြုအထက်ဖော်ပြထားသည့်ကွန်ရက်များ hierarchical စီအဆင့်ဆင့်အတွက် labile, အလုပ်လုပ်တဲ့ကြားခံအဖြစ်အမှုဆောင်, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အထူးသဖြင့်, ထို striatum နှင့် midbrain အကြားမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ်ဆက်သွယ်မှု (အလားအလာကွန်ရက်များအကြားအပြန်အလှန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မတစ်ဦးခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းကအကြံပြုပုံ 2) ။ Haber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း striatal အာရုံခံသူတို့အပြန်အလှန် DA စီမံချက်များခံယူရာမှ DA အာရုံခံတိုက်ရိုက် inhibitory စီမံချက်များပေးပို့နှင့်လည်းဖြစ်သောအလှည့်စီမံကိန်းတွင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား striatal ဧရိယာ (ရန် DA အာရုံခံမှပရောဂျက်Haber et al ။ , 2000) ။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာ limbic ကွန်ရက်များအနေဖြင့်အသင်းနှင့် sensorimotor ကွန်ယက်, တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်ချက်အတွက်အချက်အလက်များ၏အစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ဝါဒဖြန့်ခွင့်ပြုပါ။ တိုက်ဆိုင်လာမယ့်အဆင့်ကိုမှာ DA signal ကို potentiating စဉ်ဥပမာ, Pavlovian ခန့်မှန်းခြင်း (CS ၏ဝယ်ယူတန်ဖိုးကို), အ limbic အဆငျ့မှာထိရောက်သောသင်ကြားမှု signal ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါထိရောက်သောသင်ကြားမှု signal ကို၏ဖျက်သိမ်းခြင်းပုံမှန်အား striatum ထံမှ GABAergic အလတ်စား spiny projection အာရုံခံထံမှ DA အာရုံခံမှ, ဥပမာတစ်ခု inhibitory projection ကနေတစ်ဆင့်တစ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် signal ကိုအကောင်အထည်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းအဆိုပါခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းကအကြံပြုအဖြစ် (Haber et al ။ , 2000; Haber, 2003), အ DA signal ကို၏အလားအလာအိမ်နီးချင်း cortico-Basal ganglia ကွန်ယက်ကို (ထိုအဆင့်ဆင့်အတွက်လာမယ့်အဆင့်အထိ) disinhibitory စီမံချက်များမှတဆင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဘို့ (ဆိုလိုသည်မှာ GABAergic striatal projection အာရုံခံ DA အာရုံခံမှ GABAergic interneurons nigral မှ) ။ ထို့ကြောင့် limbic ကွန်ယက်၏လေ့လာသင်ယူတန်ဖိုး (အပြုအမူလိုက်လျောညီထွေတစ်ဦးချင်းစီကြားမှာနှင့်အတူစစ်နှင့် amplified ခံရဖို့ခွင့်ပြု, The Associated ကွန်ယက်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်Ashby၊ ၁၉၆၀) ။ ဒါကမော်ဒယ်, ဒါကြောင့်, သင်ယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်စဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောကွန်ရက်များ၏တိုးတက်သောပါဝင်ပတ်သက်မှု, ဒေတာအမျိုးမျိုးကထောက်ခံအကြံပြုချက် (ခန့်မှန်းJueptner et al ။ , 1997b; Miyachi et al ။ , 1997; Miyachi et al ။ , 2002; ယဉ်, 2004; Everitt နှင့် Robbins, 2005; ယဉ်များနှင့် Knowlton, 2005; ဘီးလင်းနှင့် Everitt, 2008).
ထိုကဲ့သို့သောသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အဖြစ်ကွဲပြားအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အပြန်အလှန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်, ဒီမျိုးမော်ဒယ်များများအတွက်မြေသြဇာကိုစမ်းသပ်မြေပြင်သည်။ အမှန်မှာထို hierarchical မော်ဒယ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အပေါ်မကြာသေးမီကစမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ စံပြအဆိုအရ Pavlovian-ဆာပ interaction ကအဆိုပါ striatum နှင့် DA အာရုံခံအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ DA (DA ရန်အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းသောယေဘုယျလွှဲပြောင်းနှင့်, VTA ၏ဒေသခံ inactivation များအတွက်အရေးပါဖြစ်ပေါ်လာသောDickinson et al ။ , 2000; Murschall နှင့် Hauber, 2006); (ထို accumbens သို့ယူဆရ DA အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးပေးသောစိတ်ကြွဆေး၏ဒေသခံပြုတ်ရည်, သိသိသာသာကမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်သော်လည်းWyvell နှင့် Berridge, 2000) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တိကျတဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ventral striatal dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ အချို့ကသက်သေအထောက်အထား (က VTA ၏ inactivation ပြီးနောက်နှမြောစေခြင်းငှါအကြံပြုCorbit et al ။ , 2007) ဒါပေမယ့်အဖြစ် Corbit နှင့် Janak (2007) မကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်, တိကျတဲ့အပြောင်းအရွှေ့အရေးယူရွေးချယ်ရေးကျော်လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်၏ဤရှုထောင့်ကတော့ nigrostriatal Project (ပါဝင်စေခြင်းငှါ, အကြံပြု, ထို DLS ၏ inactivation အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနေသည်Corbit နှင့် Janak, 2007) ။ အဆိုပါ hierarchical ရှုထောင့်နှင့်အတူသဘောတူ, Corbit နှင့် Janak (2007) ထို့အပြင်ခြင်းဖြင့် accumbens shell ကို၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်အဖြစ် DLS inactivation အများကြီး Palovian တွေကို (များ၏ရွေးချယ် excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျက်သိမ်းသော်လည်း, တွေ့ရှိခဲ့ Corbit et al, 2001), အ DMS ၏ inactivation (The Associated cortico-Basal ganglia ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောဤတွေကိုအထွေထွေ excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုထိန်းသိမ်းပေါ်ထွန်းနေတုန်းလည်း mediodorsal thalamus ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ကို transfer သာရလဒ်ကို-selection ဖျက်သိမ်းOstlund နှင့် Balleine, 2008) ။ ဤအပဏာမရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီးအဆိုပါ DMS အဆိုပါ DLS ဆာပလုပ်ရပ်များအပေါ် Pavlovian တွေကိုတိကျတဲ့နှင့်အထွေထွေ excitatory သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း, သာတိကျတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ, အ dorsal striatum မှပရောဂျက်တစ်ခုကို DA ဆဲလ်မှကျယ်ပြန့်သည့် limbic striatum စီမံကိန်းများကို (Nauta et al ။ , 1978; Nauta, 1989); ပြန် midbrain ဖို့ striatum ဖို့ dopaminergic စီမံချက်များနှင့် striatal Project (အလွန်အမင်းအချိုးမညီဖြစ်ကြောင်းHaber, 2003) ။ အဆိုပါ limbic striatum DA အာရုံခံတစ်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်အစုံမှကျယ်ပြန့် output ကိုပို့ပေးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပု sensorimotor striatum ၏မှန်သေး DA အာရုံခံကနေကန့်သတ် input ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ အရှင် limbic ကွန်ရက်များ The Associated နှင့် sensorimotor ကွန်ရက်များကိုထိန်းချုပ်ပြီးပြည့်စုံအနေအထား၌ရှိကြ၏။ ဤတွင် neuroanatomy ဆာပအပြုအမူများ Pavlovian ပံ့ပိုးပြောင်းပြန်ထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းကြောင်းအမူအကျင့်ဒေတာနှင့်အတူသဘောတူ; အမှန်ပင်, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားဆဲ neurobiological ရှင်းပြချက်စောင့်ကြိုကြောင်း Pavlovian CRS-တစ်ဦးတွေ့ရှိချက် (ဆာလုပ်ရပ်များတားစီးထက် excite လေ့ကြောင်းအကြံပြုအီလီဆန်နှင့် Konorski, 1964; ဝီလျံ, 1965).
ဒီနေရာမှာဆွေးနွေး hierarchical မော်ဒယ်ကြောင့်သတိပြုသင့်ပါတယ်, (ထို cortex အပေါ်သီးသန့်မှီခိုကြောင့်အခြားသူတွေနဲ့ cortical ဒေသများအကြားတာဝေးပစ်ဆက်သွယ်မှုကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်Fuster, 1995) ။ ဒါဟာအချို့သတ်မှတ်ထုံးစံ၌, သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကောင်အထည်ဖေါ်သောမဟုတ်ဘဲ cortical module တွေတစ် potpourri ကြောင့်ကြည့်ရှုနေသည်ထက်, လူသိများအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဦးနှောက်၏ဆက်သွယ်မှုထည့်သွင်း။ ဒါဟာအစ 19 ထံမှအမွေဆက်ခံ, ယူဆချက်ကိုရှောင်th ရာစုအာရုံကြော, ယေဘုယျအတွက်နှောက် cortex ကြောင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အတွင်း prefrontal cortex, တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ခုလုံးကိုဦးနှောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ '' မြင့်မားတဲ့ '' homuncular ယူနစ်ဖြစ်ပေါ်လာသော (Miller နဲ့ Cohen ကို, 2001).
Self-generated လုပ်ရပ်တွေကိုအဘို့နှင့်၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောအလွှာများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍထင်ဟပ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူပြည်နယ် / လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ကွဲပြားခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများရှိသင့်ပါသည် (ဈ): ထို့အပြင်အတော်ကြာတိကျတဲ့ဟောကိန်းများပစ္စုပ္ပန်မော်ဒယ်ကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ (ii) တစ်ဦးချင်းစီ discrete cortico-Basal ganglia ကွန်ယက်၏အဆိုပါ pallidal နှင့် thalamic အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီကွန်ယက်အတွက်တွေးဆအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲရုံ cortical နှင့် striatal အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။ (iii) သင်ယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်စဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောကွန်ရက်များ၏တိုးတက်သောပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသင့်ပါသည်။ (ဃ) လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်အလှည့်, dorsal striatal လှုပ်ရှားမှုအတွက်, DA အာရုံခံထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ် Accumbens ။ ကအစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီး ဟော်လန် (2004) သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဆာလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြု, The Associated နှင့် sensorimotor ကွန်ရက်ဒီ 'limbic' 'ထိန်းချုပ်မှုတိုးချဲ့လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအားကောင်းလာစေရန်မျှော်လင့်ရသည်။
အသေးစိတ်ဒေတာမရှိရင်ကြောင့်နေဆဲ hierarchical မော်ဒယ်၏တရားဝင်အကောင့်ပူဇော်ဖို့စောလွန်းဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအထက်ပါဆွေးနွေးမှုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကျိုးကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏သဘောသဘာဝနှင့်မလုံလောက်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာယူဆချက်အပေါ် mesoaccumbens ဆုလာဘ်အယူအဆငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောလက်ရှိဗားရှင်းစေသင့်ပါတယ်။ စညျးလုံးအခြေခံမူ, သိပ္ပံနည်းကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အမြဲတမ်းရည်မှန်းချက်ကသာထိုအဖြစ်နိုင်သည်သို့သော် unwieldy, စမ်းသပ်အချက်အလက်များ၏လက်တွေ့ဘဝအပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ပါသည်။ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်သောကွောငျ့, နောက်ဆုံးမှာ, အပြုအမူ၏မျိုးဆက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု, အသေးစိတ်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များနားလည်သဘောပေါက်ရန်သော့ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်နှင့်ဝယ်ယူကိုယ်ခံစွမ်းအား၏စေ့စေ့စပ်စပ်ဖော်ပြချက်အဖြစ်တာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏ elucidation ခွင့်ပြုထားသည်။ ထင်ရသောတစ် truism သော်လည်း, ကခဲကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဖော်ပြထားနှင့်တိကျစွာနှင့်အတူတိုင်းတာသောအတိုင်းအတာအထိဦးနှောက်ယန္တရားများနားလည်နိုင်သော၏အကြိုးကိုလြှော့တှနိုင်ပါသည်။ အာရုံကြော function ကို၏လေ့လာမှုစမ်းသပ်မှုတွေအထူထောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်, action ကို-ရလဒ်ကိုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု-ရလဒ်ကိုပေါ်ဖြစ်ပေါ်၏သာဓကများအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည်သောအခါ, လူသိများခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်ဇီဝကမ္မယန္တရားများသစ်ကို၏ဖော်မြူလာမှဦးဆောင်အသစ်တစ်ခုအလငျး၌ရှုမြင်ကြသည် ယူဆချက်နှင့်အသစ်စမ်းသပ်ချက်၏ဒီဇိုင်းကို။ ဒီဦးတည်ချက်တစ်ခုကနဦးခြေလှမ်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကဒီမှာဆွေးနွေးမူဘောင်အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်အသုံးဝင်သောစမှတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျနော်တို့အထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးချက်များသည်ဒါဝိဒ်မေတ္တာရှင်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ HHY အဆိုပါ Intramural လက်တွေ့၏ဌာနခွဲများနှင့် NIH, NIAAA ၏အခြေခံသုတေသနများကထောက်ခံခဲ့သည်။ SBO NIH ထောက်ပံ့ငွေ MH 17140 နှင့် HD ကို 56446 အားဖြင့် MH 59257 နှင့် BWB ပေးရန် NIH ကထောက်ခံသည်။
အဒမ် CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ တန်ဖိုးအားဖြည့်ဖို့တုံ့ပြန်ဆာ၏ sensitivity ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာ။ စမ်းသပ်ဆဲစိတ်ပညာ၏သုံးလပတ်ဂျာနယ်။ 1982; 33b: 109-122 ။
တန်ဖိုးအားဖြည့်အောက်ပါတုံ့ပြန်ဒမ် CD ကို, Dickinson အေတူရိယာဆိုင်ရာ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏သုံးလပတ်ဂျာနယ်။ 1981; 33: 109-122 ။
အလက်ဇန်းဒါး GE, DeLong MR, Strick PL ။ Basal ganglia နှင့် cortex ချိတ်ဆက် function အသားအရောင်ခွဲခြားဆားကစ်၏စင်ပြိုင်အဖွဲ့အစည်းက။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1986; 9: 357-381 ။ [PubMed]
Ashby WR ။ ဦး နှောက်ဒီဇိုင်း။ ဒုတိယထုတ်ဝေ။ ချပ်မန်း & ခန်းမ; 1960 ။
Atallah HE၊ Lopez-Paniagua: D, Rudy JW, O'Reilly RC ။ အဆိုပါ ventral နှင့် dorsal striatum အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာသီးခြား။ နတ်နေရာသစ်။ 2007; 10: 126-131 ။ [PubMed]
Balleine BW ။ ဆာအေးစက်အတွက်မက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Mowrer RR, Klein SB, အယ်ဒီတာများ။ ခေတ်ပြိုင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏လက်စွဲစာအုပ်။ Mahwah, NJ, အမေရိကန်: Lawrence Erlbaum Associates မှ, Inc, ထုတ်ဝေသူများ, 2001 ။ စစ။ 307-366 ။
Balleine BW ။ အစားအစာ-ရှာ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများ: corticostriatolimbic ဆားကစ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ, arousal နှင့်ဆုလာဘ်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 717-730 ။ [PubMed]
Balleine BW, Corbit LH ။ accumbens core နဲ့ shell ကို၏တွေ့ရှိရပါသည် Palovian-ဆာလွှဲပြောင်း၏အထွေထွေနှင့်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ပုံစံများအပေါ် dissociable သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်; အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး; 2005 ။
Balleine BW, Killcross အက်စ်စင်ပြိုင်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့: amygdala function ကိုတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံအမြင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006; 29: 272-279 ။ [PubMed]
ဘီးလင်း: D, Everitt BJ ။ အကျင့်ရှာကင်းသည့် Dorsal Striatum အတူ Ventral ချိတ်ဆက်ခြင်း Dopamine-မှီခို Serial ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 432-441 ။ [PubMed]
Bolles R. စစ်ကူ, မျှော်မှန်းနှင့်သင်ယူမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1972; 79: 394-409 ။
အဆိုပါ Basal ganglia ရွေးချယ်မမျှော်လင့်ဘဲကြိုးတွေကိုတုံ့ပြန်ရန်အပြိုင် excitatory နှင့် inhibitory သင်ယူမှုလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဘရောင်း J ကို, Bullock: D, Grossberg အက်စ်။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 10502-10511 ။ [PubMed]
ဘရောင်း PL, Jenkins HM ။ ခို၏သော့ပုခက်ကိုအလိုအလျောက်ပုံဖော်ခြင်း။ အပြုအမူ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဂျာနယ်။ 1968; 11: 1-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cagniard B, Beeler ဂျာ Britt JP, McGehee DS, Marinelli M က, Zhuang X တို့မှာ Dopamine အသစ်သောသင်ယူမှု၏မရှိခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည် scales ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 541-547 ။ [PubMed]
Cardinal RN, ချောင် TH ။ နျူကလိယ core ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင်နှောင့်နှေးအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှောင့်နှေး accumbens ။ BMC neuroscience ။ 2005; 6:9။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Colwill RM, Rescorla RA ။ ဆာသင်ယူမှုအတွက် Associative အဆောက်အဦများ။ ခုနှစ်တွင်: Bower, G, အယ်ဒီတာ။ သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ပညာ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1986 ။ စစ။ 55-104 ။
Corbit LH, Balleine BW ။ ဆာအေးစက်အတွက် prelimbic cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003; 146: 145-157 ။ [PubMed]
Corbit LH, Janak PH သည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သော်လည်းမ medial dorsal striatum ၏ Inactivation ဆာပတုံ့ပြန်အပေါ် Pavlovian လှုံ့ဆော်မှုများ၏ excitatory သက်ရောက်မှုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 13977-13981 ။ [PubMed]
Corbit LH, muir JL, Balleine BW ။ ယင်းနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆာအေးစက်အတွက် accumbens: accumbens core နဲ့ shell ကိုအကြားတစ်ဦး functional dissociation ၏သာဓက။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21: 3251-3260 ။ [PubMed]
Corbit LH, muir JL, Balleine BW ။ mediodorsal thalamus ၏တွေ့ရှိရပါသည်နှင့် thalamic အရေးပါ anterior ကြွက်များတွင်ဆာအေးစက်အပေါ် dissociable သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 1286-1294 ။ [PubMed]
Corbit LH, Janak PH သည်, Balleine BW ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်နှင့် inactivation အတွက်ဆိုင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: Pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်း၏အထွေထွေနှင့်ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့ပုံစံများ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 26: 3141-3149 ။ [PubMed]
ကော်စတာ RM, Cohen ကို: D, Nicolelis MA ။ ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူစာရှောင်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးသောမော်တာကျွမ်းကျင်မှုစဉ်အတွင်း corticostriatal plasticity Differential ။ Curr Biol ။ 2004; 14: 1124-1134 ။ [PubMed]
Cragg SJ, Hill CJ, Greenfield လုပ် SA ။ အဆိုပါ nonhuman မျောက်များ၏ dorsal striatum အတွက် functional domains များ dopamine ၏ dynamic အပြုအမူများကသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 5705-5712 ။ [PubMed]
Davis က J ကို, Bitterman ME ။ အခြားအမူအကျင့် (DRO) ၏ differential အားဖြည့်: တစ်ဦးက လက်ခံ. -ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဂျာနယ်။ 1971; 15: 237-241 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဒါယန်းကို P ကို, Balleine BW ။ ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားဖြည့်သင်ယူမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36: 285-298 ။ [PubMed]
Delgado MR, Stenger VA သို့, Fiez ဂျေအေ။ လူ့ caudate နျူကလိယအတွက်လှုံ့ဆျောမှု-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု။ Cereb Cortex ။ 2004; 14: 1022-1030 ။ [PubMed]
Delgado MR, Miller က MM, Inati S က, Phelps EA ၏။ ဆုလာဘ်-related ဖြစ်နိုင်ခြေသင်ယူမှုတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2005; 24: 862-873 ။ [PubMed]
Dickinson အေလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလေ့အထများ: အပြုအမူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်။ 1985; B308: 67-78 ။
Dickinson အေတူရိယာဆိုင်ရာကိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Mackintosh NJ, အယ်ဒီတာ။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု။ Orlando တွင်: ပညာရေးဆိုင်ရာ; 1994 ။ စစ။ 45-79 ။
Dickinson တစ်ဦးက, Dear MF ။ အစာစားချင်စိတ်-ဆန္ဒရှိ interaction ကနှင့် inhibitory ဖြစ်စဉ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Dickinson တစ်ဦးက, Boakes RA, အယ်ဒီတာများ။ သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ယန္တရား။ Hillsadale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates မှ, 1979 ။
Dickinson တစ် ဦး, Charnock DJ သမား။ ထိန်းသိမ်းထားဆာပအားဖြည့်နှင့်အတူအရေးပေါ်သက်ရောက်မှု။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏လပတ်ဂျာနယ်။ နှိုင်းယှဉ် & ဇီဝကမ္မစိတ်ပညာ။ 1985; 37: 397-416 ။
Dickinson တစ်ဦးက, Balleine ခလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်တုံ့ပြန်မှု: အပြုအမူများ၏ dual-စိတ်ပညာ။ ခုနှစ်တွင်: ။ et al Eilan N ကို, ဆက်မက်ကာသီ RA, အယ်ဒီတာများ။ Spatial ကိုယ်စားပြုမှု: ဒဿနိကဗေဒနှင့်စိတ်ပညာပြဿနာများ။ Malden MA, အမေရိကန်: ဘလက်ဝဲလ်ထုတ်ဝေ Inc မှ .; 1993 ။ စစ။ 277-293 ။
Dickinson A, Balleine ခ။ စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်၏လည်ပတ်မှုတွင်သင်ယူခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ခုနှစ်တွင်: Pashler H ကို, Gallistel R ကို, အယ်ဒီတာများ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏စတီဗင်ရဲ့လက်စွဲစာအုပ် (3rd ed ။ ), Vol ။ ၃။ သင်ယူခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်၊ အမေရိကန် - John Wiley & Sons, Inc ။ ;3စစ။ 2002-497 ။
Dickinson A, Campos J, Varga ZI, Balleine ခနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တူရိယာအေးစက်။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏လပတ်ဂျာနယ်: နှိုင်းယှဉ် & ဇီဝကမ္မစိတ်ပညာ။ 1996; 49: 289-306 ။ [PubMed]
အီလီဆန် GD, ဆာအေးစက်အတွက်တံထွေးနှင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှု၏ Konorski ဂျေ Separation ။ သိပ္ပံ။ 1964; 146: 1071-1072 ။ [PubMed]
Fuster JM ။ အဆိုပါနှောက် cortex အတွက်မှတ်ဉာဏ်။ ကိန်းဘရစ်ချ်: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1995 ။
Gallistel CR, Fairhurst S က, ဗာလစံ P. အဆိုပါသင်ယူမှုကွေး: တစ်အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဂယက်ရိုက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004; 101: 13124-13131 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 805-812 ။ [PubMed]
Groenewegen HJ, Berendse HW, Wolters JG, Lohman က AH ။ တစ်ဦးအပြိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား: အ striatopallidal စနစ်, thalamus နှင့် amygdala အတူ prefrontal cortex ၏ခန္ဓာဗေဒကြားဆက်ဆံရေး။ prog ဦးနှောက် Res ။ 1990; 85: 95-116 ။ ဆွေးနွေးမှု 116-118 ။ [PubMed]
Guthrie ER ။ သင်ယူမှု၏စိတ်ပညာ။ နယူးယောက်: Harpers; 1935 ။
Haber SN ။ အဆိုပါမျောက် Basal ganglia: အပြိုင်နှင့် Integrated ကွန်ရက်များ။ J ကို Chem Neuroanat ။ 2003; 26: 317-330 ။ [PubMed]
Hammond ဟာ LJ ။ အခမဲ့-operation အပြုအမူများ၏အစာစားချင်စိတ်အေးစက်အပေါ်သို့အရေးပေါ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1980; 34: 297-304 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Haruno M က, မျိုးစုံ cortico-striatal ကွင်း၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် Kawato အမ် Heterarchical အားဖြည့်-သင်ယူမှုမော်ဒယ်: လှုံ့ဆော်မှု-action ကို-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့သင်ယူမှုအတွက် fMRI စာမေးပွဲ။ အာရုံကြော Netw ။ 2006a; 19: 1242-1254 ။ [PubMed]
Haruno M က, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-action ကို-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့သင်ယူမှုစဉ်အတွင်း putamen နှင့် caudate နျူကလိယအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်အမှား၏ Kawato အမ်အမျိုးမျိုးအာရုံကြောဆက်စပ်။ J ကို Neurophysiol ။ 2006b; 95: 948-959 ။ [PubMed]
Haruno M က, Kuroda T က, Doya K ကို Toyama K ကို Kimura M က, Samejima K ကို Imamizu H ကို, caudate နျူကလိယအတွက်ဆုလာဘ်-based အပြုအမူသင်ယူမှု၏ Kawato အမ်တစ်ဦးကအာရုံကြော Correlate: တစ် stochastic ဆုံးဖြတ်ချက်တာဝန်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 1660-1665 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ် PJ, Sadeghian K ကိုကယ်လီ AE ။ ဆာသင်ယူမှု၏အစောပိုင်းစုစည်းပြီးယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်လိုအပ်သည်။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 1327-1331 ။ [PubMed]
ဟာနန်ဒက်ဇ် PJ, Andrzejewski ME, Sadeghian K ကို Panksepp JB, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ်အတွက် AMPA / kainate, NMDA နှင့် dopamine D1 အဲဒီ receptor function ကိုအဓိက accumbens: ဆာပမှတ်ဉာဏ်၏ encoding ကနှင့်စုစည်းပြီးအတွက် context-ကန့်သတ်ထားအခန်းကဏ္ဍ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2005; 12: 285-295 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hershberger WA ။ အဆိုပါရှာဖွေနေဖန်မှတဆင့်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှု။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူခြင်းနှင့်အပြုအမူ။ 1986; 14: 443-451 ။
Heyes CM, Dawson ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ တစ်ဦး bidirectional ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. ကြွက်များတွင်စူးစမ်းလေ့လာသင်ယူမှု၏တစ်ဦးကသရုပ်ပြ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏လပတ်ဂျာနယ်။ 1990; 42 (1): 59-71 ။ [PubMed]
Hikosaka အို Sakamoto M က, မျောက် caudate အာရုံခံ၏ Usui အက်စ် Functional ဂုဏ်သတ္တိများ။ III ကို။ ပစ်မှတ်နှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ထားနှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ။ J ကို Neurophysiol ။ 1989; 61: 814-832 ။ [PubMed]
ဟော်လန် PC ကို။ Pavlovian-ဆာပအပြောင်းအရွှေ့နှင့်တန်ဖိုးအားဖြည့်အကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 2004; 30: 104-117 ။ [PubMed]
ဟော်လန်ကို PC, Rescorla RA ။ first- နှင့်ဒုတိယယူမှုကိုအစာစားချင်စိတ်အေးစက်ပြီးနောက်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု devaluing ၏နည်းလမ်းနှစ်ခု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 1975; 1: 355-363 ။ [PubMed]
Hollerman JR, Tremblay L ကို, မျောက် striatum အတွက်အပြုအမူ-related အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထား၏ Schultz ဒဗလျူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80: 947-963 ။ [PubMed]
Houk JC, အဒမ် JL, Barto AG က။ အဆိုပါ Basal ganglia အားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအာရုံကြောအချက်ပြထုတ်ပေးနှင့်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကို၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ ခုနှစ်တွင်: Houk JC, JD, DB, အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal ganglia အတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏မော်ဒယ်များ။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1995 ။ စစ။ 249-270 ။
အပြုအမူ၏ Hull က C. အခြေခံမူ။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts; 1943 ။
Jedynak JP, Uslaner JM, Esteban ဂျာရော်ဘင်ဆင် TE ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 847-853 ။ [PubMed]
ယောလ: D, Weiner ဗြဲအဆိုပါ Basal ganglia-thalamocortical ဆားကစ်၏အဖှဲ့အစညျး: မဟုတ်ဘဲတံခါးပိတ်အသားအရောင်ခွဲခြားထက်အပြန်အလှန်ဖွင့်လှစ်။ neuroscience ။ 1994; 63: 363-379 ။ [PubMed]
ယောလ: D, Weiner ဗြဲကြွက်များနှင့်မျောက်ဝံများအတွက် striatum အတူ dopaminergic စနစ်၏အဆိုပါဆက်သွယ်မှု: အ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် compartmental အဖွဲ့အစည်းကမှလေးစားမှုနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience ။ 2000; 96: 451-474 ။ [PubMed]
Jueptner M က, Frith CD ကို, Brooks DJ သမား, Frackowiak RS, Passingham RE ။ မော်တာသင်ယူမှု၏ခန္ဓာဗေဒ။ II ကို။ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားအားဖြင့် Subcortical အဆောက်အဦများနှင့်သင်ယူမှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1997a; 77: 1325-1337 ။ [PubMed]
Jueptner M က, Stephan KM, Frith CD ကို, Brooks DJ သမား, Frackowiak RS, Passingham RE ။ မော်တာသင်ယူမှု၏ခန္ဓာဗေဒ။ အရေးယူမှဗြဲတိုကျရိုကျ cortex နဲ့အာရုံစူးစိုက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1997b; 77: 1313-1324 ။ [PubMed]
Kanazawa ငါ Murata M က, Kimura အမ် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် choreic လှုပ်ရှားမှုမျိုးဆက်အတွက်၎င်း၏ receptors ။ Adv Neurol ။ 1993; 60: 107-112 ။ [PubMed]
Kawagoe R ကို, Takikawa Y ကို, ဆုလာဘ်၏ Hikosaka O. မြျှောလငျ့သော Basal ganglia အတွက်သိမြင်မှုအချက်ပြမှုများ modulates ။ နတ် neuroscience ။ 1998; 1: 411-416 ။ [PubMed]
Kimura M က, Aosaki T က, မိမိဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း putamen နှင့် caudate နျူကလိယ၏ differential ကိုအခန်းကဏ္ဍများ Ishida အေ Neurophysiological ရှုထောင့်။ Adv Neurol ။ 1993; 60: 62-70 ။ [PubMed]
ဦးနှောက်၏ Konorski ဂျေ Integrated လှုပ်ရှားမှု။ ချီကာဂို: ချီကာဂိုစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; 1967 ။
Lerchner တစ်ဦးက, la ကင်မရာ, G, Richmond ခလုပ်နေတာမပါဘဲသိမှတ်ကြလော့။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 15-17 ။ [PubMed]
Lohrenz T က, McCabe K ကို Camerer CF, မွန်တဂူ PR စနစ်။ တစ်ဦး sequential ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် fictive သင်ယူမှုအချက်ပြမှုများ၏အာရုံကြောလက်မှတ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 9493-9498 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mackintosh NJ ။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူမှု၏စိတ်ပညာ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1974 ။
Miller က ek, Cohen ကို JD ။ prefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2001; 24: 167-202 ။ [PubMed]
အဆိုပါနဂိုအတိုင်းဦးနှောက်ထဲမှာ Miller က R. အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1981 ။
Miyachi S က, Hikosaka အိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်ယူမှု၏အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းအဆင့်မျောက် striatal အာရုံခံ၏ Lu က X တို့မှာ Differential activation ။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 2002; 146: 122-126 ။ [PubMed]
Miyachi S က, Hikosaka အို Miyashita K ကို Karadi Z ကို, Rand MK ။ sequential လက်လှုပ်ရှားမှု၏သင်ယူမှုအတွက်မျောက် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍ Differential ။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1997; 115: 1-5 ။ [PubMed]
ဂူ PR စနစ်, Hyman SE, Cohen ကို JD ။ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine ဘို့တွက်ချက်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2004; 431: 760-767 ။ [PubMed]
Murschall တစ်ဦးက, အ ventral tegmental ဧရိယာ၏ Hauber ဒဗလျူ Inactivation ဆာပစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် Pavlovian တွေကိုအထွေထွေ excitatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖျက်သိမ်း။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2006; 13: 123-126 ။ [PubMed]
Nauta WJ, Smith ကမိသားစုဆရာဝန်, Faull RL, Domesick vB ။ Efferent ဆက်သွယ်မှုနှင့်နျူကလိယ၏ nigral afferents ကြွက်များတွင် septi accumbens ။ neuroscience ။ 1978; 3: 385-401 ။ [PubMed]
Nauta WJH ။ အဆိုပါနှောက် cortex နဲ့ limbic သည့်စနစ်နှင့်အတူ Corpus striatum ၏အပြန်အလှန်လင့်များ: လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတွေးတစ်ဘုံအလွှာ? ခုနှစ်တွင်: Mueller, အယ်ဒီတာ။ အာရုံကြောနှင့် Psychiatry: စိတ်ထဲတွင်၏အစည်းအဝေးတစ်ခု။ ဘေဆယ်: Karger; 1989 ။ စစ။ 43-63 ။
Ostlund SB, Balleine BW ။ ဆာအရေးယူရွေးချယ်ရေးအတွက် basolateral amygdale နှင့် mediodorsal thalamus ၏ differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 4398-4405 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပါကင်ဂျာ Willoughby PJ, Robbins TW, Everitt BJ ။ limbic cortical-ventral striatopallidal စနစ်များများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: အ anterior cingulate cortex နဲ့နျူကလိယ၏အဆက်ဖြုတ် core ကို Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူချို့ယွင်း accumbens ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 42-63 ။ [PubMed]
ပါကင်ဂျာ Dalley JW, Cardinal RN, Bamford တစ်ဦးက, Fehnert B, Lachenal, G, Rudarakanchana N ကို, Halkerston KM, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလိယ dopamine လျော့ကျဝယ်ယူခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်း accumbens: mesoaccumbens dopamine function ကိုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 137: 149-163 ။ [PubMed]
Paxinos, G, stereotaxic သြဒီနိတ်အတွက် Franklin K. အဆိုပါ mouse ကိုဦးနှောက်။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2003 ။
Pecina S ကိုစမစ် KS, Berridge KC ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Hedonic ပူအစက်အပြောက်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2006; 12: 500-511 ။ [PubMed]
Pothuizen နာရီ, Jongen-Relo AL, Feldon J ကို, ရီကယ်လာ။ ရွေးချယ်နျူကလိယ၏သက်ရောက်မှုများကိုနှစ်ချက် dissociation ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူထကြွလွယ်သော-ရွေးချယ်မှုအပြုအမူနှင့် salience အပေါ် core နဲ့ shell ကိုတွေ့ရှိရပါသည် accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005; 22: 2605-2616 ။ [PubMed]
Rescorla RA ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် CS ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်မရှိခြင်းအတွက်ထိတ်လန့်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1968; 66: 1-5 ။ [PubMed]
Rescorla RA ။ Pavlovian အေးစက်၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1988; 11: 329-352 ။ [PubMed]
Rescorla RA, ရှောလမုန် RL ။ Two-ဖြစ်စဉ်ကိုသင်ယူမှုသီအိုရီ: Pavlovian အေးစက်နှင့်ဆာပသင်ယူမှုအကြားဆက်ဆံရေး။ Psychol ဗျာ 1967; 74: 151-182 ။ [PubMed]
Restle (အက်ဖ်အက်ဖ်) အက်ဖ်တင့်များဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း -“ နေရာ - တုံ့ပြန်မှု” မေးခွန်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1957; 64: 217 ။ [PubMed]
Reynolds ကဖြစ်မှု, Wickens JR ။ corticostriatal synapses ၏ Dopamine-မှီခို plasticity ။ အာရုံကြော Netw ။ 2002; 15: 507-521 ။ [PubMed]
ဆန် ME, Cragg SJ ။ နီကိုတင်း striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related dopamine အချက်ပြမှုများကိုချဲ့ထွင်။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 583-584 ။ [PubMed]
ဆန် ME, Cragg SJ ။ quantal လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက် Dopamine spillover: အ nigrostriatal လမ်းကြောင်းအတွက် dopamine ဂီယာ Rethinking ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်က S, မိုးရေ AJ, Hnasko TS, Palmiter RD ။ အဆိုပါ dorsal striatum မှ dopamine အချက်ပြ၏ viral ပွနျလညျထူထောငျ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်မှနျဆာပအေးစက် restores ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 567-578 ။ [PubMed]
Roitman MF, ဝီ RA, Carelli RM ။ နျူကလိယတွင် neuron ပင်, ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ညှိသူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းဝှက်နှင့်မော်တာ output ကိုချိတ်ဆက်နေကြပါတယ် accumbens ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 587-597 ။ [PubMed]
Schultz မျောက် dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူအဆိုပါ phasic ဆုလာဘ် signal ကို။ Adv Pharmacol ။ 1998a; 42: 686-690 ။ [PubMed]
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998b; 80: 1-27 ။ [PubMed]
Schwartz B, Operations အပြုအမူ၏ Gamzu အီး Pavlovian ထိန်းချုပ်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Honig W က, Staddon ယေ, အယ်ဒီတာများ။ အော်ပရေတာအပြုအမူများလက်စွဲစာအုပ်။ နယူးဂျာစီ: Prentice ခန်းမ; 1977 ။ စစ။ 53-97 ။
ရှက်ဖီး FD ။ ဂန္နှင့်ဆာအေးစက်များအကြားဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Prokasy WF, အယ်ဒီတာ။ classical ကိုက်။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts; 1965 ။ စစ။ 302-322 ။
Skinner ခသက်ရှိများ၏အမူအကျင့်။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts; 1938 ။
Smith က-သမင်ဒရယ် SL, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ်အတွင်း NMDA နှင့် dopamine D1 receptors ၏တိုက်ဆိုင်မှု activation core ကိုအစာစားချင်စိတ်ဆာပသင်ယူမှုအဘို့လိုအပ်ပါသည် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 7737-7742 ။ [PubMed]
Sotak BN, Hnasko TS, ရော်ဘင်ဆင်က S, Kremer EJ, Palmiter RD ။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် dopamine အချက်ပြ၏ Dysregulation နို့တိုက်ကျွေးရေးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2005; 1061: 88-96 ။ [PubMed]
Spence K. နှောင့်နှေးဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက်အလယ်တန်းအားဖြည့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1947; 54: 1-8 ။
Spence K. အပြုအမူသီအိုရီနှင့်သင်ယူမှု။ Englewood ကမ်းပါး, NJ: Prentice-ခန်းမ; 1960 ။
Sutton RS, Barto AG က။ အားဖြည့်သင်ယူ။ ကိန်းဘရစ်ချ်: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
Swanson LW ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏နှောက် hemisphere စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 886: 113-164 ။ [PubMed]
Taha လုပ် SA, Fields HL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်အာခေါင်နဲ့အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများ encoding ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 1193-1202 ။ [PubMed]
Taha လုပ် SA, Fields HL ။ နျူကလိယ၏တားစီးအာရုံခံဆုလာဘ်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများအတွက် Gates signal ကိုဝှက် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 217-222 ။ [PubMed]
Thorndike EL ။ တိရိစ္ဆာန်ထောက်လှမ်းရေး: စမ်းသပ်လေ့လာမှုများ။ နယူးယောက်: အေ; 1911 ။
Tobler PN, Dickinson တစ်ဦးကတစ်ဦး conditional တားစီးပါရာဒိုင်းအတွက် dopamine အာရုံခံအားဖြင့်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်ပျက်ကွက်၏ Schultz ဒဗလျူ Coding ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 10402-10410 ။ [PubMed]
Tobler PN, O'Doherty JP, Dolan RJ, Schultz ဒဗလျူ။ လူ့အာရုံကြောဆိုင်ရာသင်ယူမှုသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာစံနမူနာတွင်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းအမှားများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2006; 95: 301-310 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tobler PN, O'Doherty JP, Dolan RJ, Schultz W. Reward သည်လူ့ဆုလာဘ်စနစ်များတွင်စွန့်စားသောသဘောထားနှင့်ဆက်စပ်သောမသေချာမရေရာနိုင်သည့်ကုဒ်များနှင့်ကွဲပြားသည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2007; 97: 1621-1632 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Trapold MA, Overmier JB ။ classical ကိုက် II ကို: လက်ရှိသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts; 1972 ။ ဆာသင်ယူမှုအတွက်ဒုတိယသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို; စစ။ 427-452 ။
Tricomi EM, Delgado MR, Fiez ဂျေအေ။ အရေးယူအရေးပေါ်ခြင်းဖြင့် caudate လှုပ်ရှားမှု Modulation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 41: 281-292 ။ [PubMed]
White ကမိုင်။ အဆိုပါ striatal matrix နှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုရည်မှတ်တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့အယူအဆ: SR memory နဲ့ဆုလာဘ်၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1989; 45: 1943-1957 ။ [PubMed]
Wickens JR, Budd CS, Hyland BI, Arbuthnott GW ။ ဆုချခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် Striatal ပံ့ပိုးမှုများကို: တစ်ထပ်လောင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ matrix ကိုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာမူကွဲ၏အဓိပ္ပာယ်အောင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1104: 192-212 ။ [PubMed]
Williams က DR ။ classical အေးစက်နှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု။ ခုနှစ်တွင်: Prokasy WF, အယ်ဒီတာ။ classical ကိုက်။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းရာစု-Crofts; 1965 ။ စစ။ 340-357 ။
Williams က DR, အခိုအတွက်ဝီလျံအိပ်ချ် Automaintenance: ဆက်ပြောပါတယ် Non-အားဖြည့်ခဲ့ပေမယ့်အနောက်ရဲ့ဩဇာကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဂျာနယ်။ 1969; 12: 511-520 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wiltgen BJ, ဥပဒေက M, Ostlund S က, Mayford M က, Balleine BW ။ ဆာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် Pavlovian တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် striatum အတွက် CaMKII လှုပ်ရှားမှုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 2491-2497 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ။ စိတ်ပညာဌာန။ Los Angeles မြို့: UCLA; 2004 ။ ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များအတွက် dorsal striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကို။
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ ။ လှုံ့ဆော်မှု-လှုံ့ဆော်မှုအသင်းအဖွဲ့များအဘို့သက်သေအထောက်အထား: စစ်ကူတန်ဖိုး conditional cue preference ကို abolishes ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2002; 116: 174-177 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ ။ နေရာအရပ်များနှင့်တုန့်ပြန်သင်ယူမှုမှ striatal ငျဒသေပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2004; 11: 459-463 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ ။ စွဲလမ်းနှင့်သင်ယူမှု။ ခုနှစ်တွင်: Stacy တစ်ဦးက, အယ်ဒီတာ။ သွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စွဲလမ်း၏လက်စွဲစာအုပ်။ တထောင်သပိတ်: Sage; 2005 ။
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ, Balleine BW ။ dorsolateral striatum ၏တွေ့ရှိရပါသည်ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းကိုထိန်းသိမ်းပေမယ့်ဆာပသင်ယူမှုအတွက်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 181-189 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ, Balleine BW ။ အဆိုပါ dorsomedial striatum အတွက် NMDA receptors ၏ပိတ်ဆို့ဆာအေးစက်အတွက်သင်ယူမှုအရေးယူ-ရလဒ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005a; 22: 505-512 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Knowlton BJ, Balleine BW ။ dorsolateral striatum ၏ Inactivation ဆာအေးစက်အတွက်အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းလဲမှုများမှ sensitivity ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006a; 166: 189-196 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Zhuang မှာ X, Balleine BW ။ hyperdopaminergic ကြွက်တွေမှာဆာပသင်ယူမှု။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2006b; 85: 283-288 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Ostlund SB, Knowlton BJ, Balleine BW ။ ဆာအေးစက်အတွက် dorsomedial striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005b; 22: 513-523 ။ [PubMed]
Zahm DS ။ နျူကလီးယပ် accumbens အပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူတုံ့ပြန်သပ္ပါယ်အချို့ subcortical အလွှာတခုတခုအပေါ်မှာ Integrated neuroanatomical ရှုထောင့်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000; 24: 85-105 ။ [PubMed]
Zahm DS ။ Basal forebrain ၏လုပ်ဆောင်မှု - ခန္ဓာဗေဒ 'macrosystems' ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောသီအိုရီ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2005 [PubMed]